1မက္ကဘီး၏ st စာအုပ် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / 1မက္ကဘီး၏ st စာအုပ်
1 မက္ကဘီး 1
1:1 ထိုသို့အလက်ဇန်းဒါးကြောင်းနောက်မှဖြစ်ပျက်, ဖိလိပ္ပု၏သားစီဒိုနီယံ, ခိတ္တိမ်ပြည်မှ လာ. ပထမဦးဆုံးဂရိနိုင်ငံမြို့၌မင်းပြုသော, ဒါရိရှနှင့်မေဒိရှင်ဘုရင်၏အလှုပ်ခတ်.
1:2 သူသည်အများသောတိုက်ပွဲများအဖြစ်ခန့်အပ်, သူအပေါငျးတို့သခံတပ်ကိုင်, သူသည်လောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်ကွပ်မျက်ခံရ.
1:3 ထိုမင်းသည်ပင်မြေကြီးစွန်းမှရှောက်သွား. ထိုမင်းသည်များစွာသောလူမျိုးတို့ဥစ္စာကိုလက်ခံရရှိ. ထိုအခါမြေကြီးတပြင်မျက်မှောက်တော်၌တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ပါသည်.
1:4 ထိုမင်းသည်အာဏာကိုစုဝေးစေ၏, ကာအလွန်အားစစ်တပ်. ထိုမင်းသည်ချီးမြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်, နှင့်သူ၏နှလုံးချီခဲ့သည်.
1:5 ထိုမင်းသည်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်နှင့်အချုပ်အခြာအာဏာခေါငျးဆောငျမြား၏ဒေသများတွင်ဖမ်းဆီးရမိ, သူတို့အထံတော်သို့မြစ်လက်တက်ဖြစ်လာပြီး.
1:6 ထိုနောက်မှ, သူသည်မိမိအိပ်ရာပေါ်မှာပြပ်ဝပ်, သူသေဆုံးမယ်လို့သိတယ်.
1:7 မိမိအစေခံကျွန်ကိုခေါ်, မိမိအငယ်သောအရွယ် မှစ. သူနှင့်အတူထမြောက်ကြသည်သူကိုမှူးမတ်. ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားသူ၏နိုင်ငံကိုခှဲဝေ, သူအသက်ရှင်သေးခဲ့စဉ်.
1:8 ထိုအလက်ဇန်းဒါးတဆယ်နှစ်နှစ်စိုးစံလေ၏, ပြီးတော့သူသေဆုံး.
1:9 နှင့်သူ၏ကျွန်သူ၏နိုင်ငံကိုရရှိသော, မိမိနေရာ၌တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်း.
1:10 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အသေခံခြင်းအပြီးသူတို့ကိုယ်သူတို့အပေါ်သရဖူများကိုဆောင်းထည့်သွင်း, ထိုသူတို့နောက်သို့နှင့်သူတို့သား, နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်; စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောတို့ကိုများပြားစေခဲ့ကြ.
1:11 ထိုအခါအပွစျရှိသူ၏အမြစ်ထိုသူတို့အထဲမှထွက်စေရှိပါတယ်သွားလေ၏, အန်ကို Illustrious, ရှငျဘုရငျကိုအန်၏သား, ရောမမြို့မှာဓားစာခံဖြစ်ခဲ့ဖူးသော. သူသည်ထိုအဟေလသလူ၏နိုငျငံတျော၏တရာ့သုံးဆယ်သတ္တမနှစ်တွင်နန်းထိုင်၏.
1:12 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဒုစရိုက်၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအမြိုးသားတို့ထံမှထွက်သွား, သူတို့ကအများအပြားဖျောင်းဖျ, ဟုဆို: "ကျွန်တော်တို့အပေါင်းတို့သည်ငါတို့ပတ်လည်၌နေသောတပါးအမျိုးသားတို့သည်အတူပဋိညာဉ်တရားကိုသွားနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြကုန်အံ့. ငါတို့သည်သူတို့ထံမှဆုတ်ခွာခဲ့ကြကတည်းကများအတွက်, အများအပြားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ပြီ။ "
1:14 ထိုအခါလူအခြို့ဒီလိုလုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်, သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ ဝင်.. ထိုသူတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားတရားနှင့်အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်တန်ခိုးပေး၏.
1:15 ထိုသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့၌အားကစားနယ်ပယ်တွင် built, လူမျိုး၏ဥပဒေများနှင့်အညီ.
1:16 ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ရေဖျားလှီးခြင်းကိုလုပ်, သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောပဋိညာဉ်တရားကိုအနေဖြင့်နုတ်ထွက်, သူတို့သည်တပါးအမျိုး၌မှီဝဲခဲ့ကြ, သူတို့သည်မကောင်းသော-ပွုသို့ရောင်းချခဲ့သည်.
1:17 ထိုနိုင်ငံသည်အန်တို့မျက်မှောက်၌အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်, သူသည်အဲဂုတ္တုပြည်ကိုအုပ်စိုးနန်း, သူကနှစ်ခုကျော်နိုင်ငံတို့စိုးစံစေခြင်းငှါဒါ.
1:18 ထိုမင်းသည်တစ်ဖိနှိပ်လူအစုအဝေးနှင့်အတူအဲဂုတ္တုပြည်၌အထဲသို့ ဝင်., လျင်မြန်သောရထားများနှင့်အတူ, နှင့်ဆင်, နှင့်မြင်းစီးသူရဲ, နှင့်သင်္ဘောတို့သည်ကြီးစွာသောများစွာသော.
1:19 ထိုမင်းသည်တော်လမီဆန့်ကျင်တဲ့စစ်ပွဲအဖြစ်ခန့်အပ်, အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်, နှင့်တော်လမီသူ၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီကွောနှင့်ပြည့်စုံလေ၏, သူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်, အများအပြားဒဏ်ရာရပြပ်ဝပ်.
1:20 ထိုမင်းသည်အဲဂုတ္တုပြည်ထဲမှာခိုင်ခံ့သောမြို့များ၏ကိုင်, သူကိုအဲဂုတ္တုပြည်တရှောက်၏ဥစ္စာကိုလက်ခံရရှိ.
1:21 နှင့်အန်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်, သူသည်အဲဂုတ္တုလှုပ်ခတ်ပြီးနောက်, တရာလေးဆယ်တတိယနှစျတှငျ, သူဣသရေလအမျိုးတဘက်၌တက်ပြီ.
1:22 ထိုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ပြီ, တစ်ဖိနှိပ်လူအစုအဝေးနှင့်အတူ.
1:23 ထိုမင်းသည်ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့်အတူသန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ဝငျ, သူသည်ရွှေယဇ်ပလ္လင်ကိုယူ, နှင့်အလင်း၏မီးခုံ, လူအပေါင်းတို့တန်ဆာ, နှင့်ရောက်ရှိခြင်းမုန့်အဘို့စားပွဲကို, နှင့်ရေစက်သွန်း၏တန်ဆာ, နှင့်ဖလား, ရွှေနှင့်အနည်းငယ်သာမော်တာ, ကုလားကာ, နှင့်သရဖူ, နှင့်ရွှေအဆင်တန်ဆာ, သောဗိမာနျတျော၏မကျြနှာမှာ. ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုဖိ.
1:24 သူသည်ထိုအရွှေငွေကို ယူ., နှင့်အဖိုးတန်ရေယာဉ်များ, သူဝှက်ထားသောဘဏ္ဍာကို ယူ. ,, ပေးသောသူကိုတွေ့. ထိုအပယ်သွားသမျှသောဤအမှုအရာ ယူ., မိမိပြည်သို့ထွက် သွား..
1:25 ထိုမင်းသည်လူတို့သညျတစ်ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေ, သူကြီးအခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့်အတူစကားပြောခဲ့ပါသည်.
1:26 အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌၎င်း, သူတို့တည်ရာအရပ်ရှိသမျှတို့အတွက်ငိုကြွေးလျက်ကြီးစွာရှိခဲ့သည်.
1:27 ထိုအခါခေါင်းဆောင်များနှင့်အကွီးအကဲမြားငိုကြွေးမြည်တမ်း, နှင့်သတို့သမီးကညာများနှင့်လုလင်များတို့သည်အားနည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်, နှင့်အမျိုးသမီးများဘုန်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်.
1:28 တိုင်းသတို့သားမြည်တမ်းခြင်းကိုချီ, နှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအိပ်ရာ၌ထိုင်တဲ့သူတွေကိုငိုကြွေးမြည်တမ်း.
1:29 ထိုပြည်သည်မိမိ၌ရှိသောမြို့သားတို့ကိုကိုယ်စားခါ, ယာကုပ်အမျိုး၏တစ်ခုလုံးကိုအိမ်သူအိမ်သားရှုပ်ထွေးမှုများကိုဝတ်လျက်ခဲ့သည်.
1:30 ကာလနှစ်နှစ်ပြီးနောက်, ရှင်ဘုရင်သည်ယုဒမြို့များအားမိမိခှမင်းသားကိုစေလွှတ်, သူလူအုပ်ကြီးနှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့သို့ လာ. ,.
1:31 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားငြိမ်းချမ်းစွာစကား, လှညျ့စားအတွက်; သူတို့ကသူ့ကိုယုံကြည်သည်.
1:32 ထိုမင်းသည်ရုတ်တရက်မြို့အပေါ်သို့တဟုန်တည်းပြေး, သူကြီးအကွိမျဒဏျအတူကလှုပ်ခတ်, သူသည်ဣသရေလအမျိုး၏လူများအများအပြားဖျက်ဆီးခံရ.
1:33 ထိုမင်းသည်မြို့ဥစ္စာကိုယူ, သူမီးနှင့်အတူမီးရှို့, သူက၎င်း၏အိမ်များနှင့်ပတ်လည်မြို့ရိုးဖျက်ဆီးခံရ.
1:34 ထိုသူတို့ကသုံ့ပန်းအဖြစ်မိန်းမများကွာဦးဆောင်, သူတို့သည်ကလေးများနှင့်တိရစ္ဆာန်ဝင်စား.
1:35 ထိုသူတို့ကတစ်ဦးအားကြီးသောအမျိုးသည်မြို့ရိုးနှင့်အတူဒါဝိဒ်၏မြို့တက် built, နှင့်ခိုင်ခံ့သောတာဝါတိုင်နှင့်အတူ, ထိုသို့သူတို့အဘို့ခိုင်ခံ့ဖြစ်လာခဲ့သည်.
1:36 ထိုအရပ်ကိုတစ်ပွစျရှိကလူကို set up, မတရားသောသူသည်ယောက်ျား, အတူတူသူတို့အထဲတွင်ခိုင်မာတဲ့ကြီးပြင်း. ထိုသူတို့ကလက်နက်နှင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသိုထား. ထိုသူတို့ကဂျေရုဆလင်များ၏ဥစ္စာမှာစုဝေး,
1:37 နှင့်အရပ်ကို၌သူတို့ကိုအပ်နှံ. ထိုသူတို့ကအလွန်ကြီးစွာသောကျော့ကွင်းဖြစ်လာခဲ့သည်.
1:38 ဤရွေ့ကား, ဣသရေလအမျိုး၌သန့်ရှင်းရာဌာနနှင့်တစ်ဦး diabolical မကောင်းသောအဆန့်ကျင်ကင်းတပ်များ၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်လာသည်.
1:39 ထိုသူတို့ကသန့်ရှင်းရာဌာနပတ်ပတ်လည်အပြစ်မရှိသောအသွေးကိုသွန်းလောင်း, သူတို့သည်သန့်ရှင်းရာဌာနညစ်ညမ်း.
1:40 ယေရုရှလင်မြို့သားဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်, နှင့်မြို့အပြင်လူများ၏နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအနွယ်တစ်ဦးလူစိမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကလေးများသူမ၏စွန့်လွှတ်.
1:41 သူမ၏သန့်ရှင်းရာဌာနလူဆိတ်ညံခဲ့, တညျးရာအရပ်နှင့်တူ, သူမ၏ပွဲနေ့စိတ်မသာညည်းတွားသို့လှည့်ခဲ့ကြ, အရှက်တကွဲအကျိုးသို့သူမ၏ဥပုသ်နေ့, ဘာမျှမသို့သူမ၏ဂုဏ်ထူး.
1:42 သူမ၏အရှက်ကွဲခြင်းသူမ၏ဘုန်းအသရေနှင့်အညီတို့ကိုများပြားစေခဲ့သည်, နှင့်သူမ၏ငျ့မွတျမှုကိုမြည်တမ်းခြင်းကိုလှည့်ခဲ့ပါတယ်သို့.
1:43 မင်းကြီးသည်အန်တိုင်းအပေါင်းတို့သည်သူ၏နိုင်ငံတော်သည်မှ wrote, လူများအပေါင်းတို့သည်တယောက်သောသူဖြစ်ရမည်ဟု, အသီးအသီးမိမိတပညတ္လက်လွှတ်သင့်ကြောင်း.
1:44 ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားဝန်ခံ, ရှငျဘုရငျသအန်၏စကားလုံးအရသိရသည်.
1:45 အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးထဲကအများအပြားသည်သူ၏ကျွန်မှဝန်ခံ, သူတို့ရုပ်တုရှေ့၌ပူဇော်သောယဇ်, သူတို့ဥပုသျနေ့ညစျညူး.
1:46 ထိုအခါရှင်ဘုရင်အက္ခရာများကိုစလှေတျ, သံတမန်တို့လက်ဖြင့်, ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ယုဒမြို့ရှိသမျှမှ: သူတို့ကမြေကြီးသားနိုင်ငံများအသင်း၏တရားအတိုင်းလိုက်နာသင့်သော,
1:49 ထိုမင်းသည်ညစ်ညူးခြင်းခံရဖို့သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုအမိန့်ထုတ်, ဣသရေလအမျိုး၏သန့်ရှင်းသောလူမျိုးတို့နှင့်အတူ.
1:50 ထိုမင်းသည် built ခံရဖို့ယဇ်ပလ္လင်တို့ကိုအမိန့်ထုတ်, နှင့်ဘုရားကျောင်း, များနှင့်ရုပ်တု, သူဝက်နှင့်ညစ်ညူးသောသိုးနွား၏ဇာတိပကတိ၏မီးရှို့အမိန့်ထုတ်,
1:51 သူတို့ရေဖျားလှီးခြင်းကိုသူတို့သားစွန့်ခွာသင့်ကြောင်း, နှင့်မစင်ကြယ်သောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမညစ်ညူးစေ, နှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သူတို့ကတရားကိုမမေ့မယ်လို့နှငျ့ဘုရားသခငျ၏အပေါငျးတို့သမျှတမှုပြောင်းလဲပစ်မယ်လို့,
1:53 ဤစကားအလုံးစုံတို့ကိုအရ, သူကအားလုံးသူ၏နိုင်ငံကိုမှရေးသားခဲ့သည်. ထိုမင်းသည်လူများကိုကျော်ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ခန့်အပ်, အဘယ်သူသည်ဤအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်မယ်လို့.
1:55 ထိုအခါလူများထံမှအများအပြား, သခင်ဘုရား၏ပညတ်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သူ, သူတို့ကအတူတကွစုဝေးကြ၏. သူတို့သည်တပြည်လုံးကိုအပေါ်သို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကျူးလွန်.
1:57 Kislev ၏လတဆယ်ငါးနေ့ရက်တွင်, တဦးကိုတရာနဲ့လေးဆယ်-ပဉ္စမနှစ်တွင်အတွက်, ရှငျဘုရငျကိုအန်ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာလူဆိတ်ညံရာ၏စက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သောရုပ်တုကိုကို set up, သူတို့သည်ယုဒပြည်သားအပေါငျးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမြို့များကိုတစ်လျှောက်လုံးယဇ်ပလ္လင်တို့ကိုတည်.
1:58 ထိုသူတို့ကလောဗန်ကိုမီးရှို့, သူတို့အိမ်၏တံခါးများမတိုင်မီနှင့်လမ်းခရီး၌ယဇ်ပူဇော်ကြ၏.
1:59 ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျ၏တရား၏စာအုပ်များတက်ဖြတ်, မီးနှင့်အတူသူတို့ကိုမဖျက်ဆီး.
1:60 သခင်ဘုရား၏ပဋိညာဉ်၏စာအုပ်များနှင့်အတူတွေ့ရှိရသူအပေါငျးတို့သရှိသူများ, နှင့်အကြင်သူသည်သခင်ဘုရား၏ပညတ်တရားကိုလေ့လာတွေ့ရှိ, သူတို့သတ်, ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်ပြန်တမ်းအရသိရသည်.
1:61 မိမိတို့အတန်ခိုးတော်အားဖြင့်, သူတို့သည်ဣသရေလလူအဖို့ဤအရာတို့ကိုပြုကြ၏, သူတို့မြို့များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်အဖြစ်, တစ်လတစ်လပြီးနောက်.
1:62 ထိုအခါလနှစ်ဆယ်-ပဉ်စမနေ့၌, သူတို့ကမြင့်မြင့်, ယဇ်ပလ္လင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်သောယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာယဇ် ပူဇော်. ,.
1:63 နှင့်သူတို့သားအရေဖျားလှီးသောမိန်းမသတ်ခဲ့ကြ, ရှငျဘုရငျကိုအန်၏အမိန့်အရသိရသည်.
1:64 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏အိမ်များတွင်မိမိတို့လည်ပင်းကိုအားဖြင့်ကလေးတွေကိုဆိုင်းငံ့, သူတို့ကိုအရေဖျားလှီးခဲ့တဲ့အဲဒီ, သူတို့သတ်.
1:65 ဣသရလေလူအများတို့သည်လည်းသူတို့ညစ်ညူးသောအမှုအရာမစားဘဲနေမယ်လို့သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကအသေခံဖို့ရွေးချယ်, မစင်ကြယ်သောအစားအစာများနှင့်အတူညစ်ညူးခြင်းခံရဖို့ထက်.
1:66 ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးသောဥပဒအပျေါမှာချိုးဖောက်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး, သူတို့သတ်ခဲ့ကြ.
1 မက္ကဘီး 2
2:1 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, အဲဒီမှာ Mattathias သည်ထ, ယောဟနျ၏သား, ရှိမောင်၏သား, ယေရုရှလင်မြို့မှ Joarib ၏သားယဇ်ပုရောဟိတ်, သူ Modin တောင်တော်ပေါ်တွင်အခြေချနေထိုင်.
2:2 ထိုမင်းသည်ငါးသား: ယောဟန်သည်, Gaddi အမည်သစ်ကိုရသောသူကိုခဲ့သည်,
2:3 ရှိမုန်, Thassi အမည်သစ်ကိုရသောသူကိုခဲ့သည်,
2:4 ယုဒ, Maccabeus အမည်ရှိသော,
2:5 ဧလာဇာ, အမည်သစ်ကိုရသောသူကိုခဲ့ပါတယ် Avaran, နှင့်ယောနသန်, အမည်သစ်ကိုရသော Apphus သူကိုခဲ့တယ်.
2:7 ထိုအ Mattathias ကပြောပါတယ်: ငါ့ကိုအဖို့ "မင်္ဂလာရှိ၏, ငါသည်ငါ၏လူတို့အဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောမြို့များ၏ဝမ်းနည်းခြင်းကြည့်ဖို့မွေးဖွားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်, ထိုအရပ်၌ထိုင်ဖို့, ကရန်သူလက်သို့ငါအပ်သနေစဉ်?
2:8 သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုအပြင်ကလူ၏လက်သို့လဲသေကြပြီ. သူမ၏ဗိမာနျတျောဂုဏ်အသရေမပါဘဲတစ်ဦးသည်လူကဲ့သို့ဖြစ်၏.
2:9 သူမ၏ဘုန်းအသရေတော်တန်ဆာသွားခြင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီ. သူမ၏ဟောင်းလူတို့သညျလမျး၌သတ်ခဲ့ကြ, နှင့်မြို့သားလုလင်တို့သည်ရန်သူသည်ထားဖြင့်လဲသေကြပြီ.
2:11 အားလုံးသူမ၏အလှတရားကိုယူသှားခဲ့သ. အခမဲ့သူသူမသည်, ကျွန်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်.
2:12 ထိုအခါ, ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းရာဌာန, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှတရား, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုန်းပျက်စီးခဲ့ပြီး, နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုကိုညစ်ညူးစေကြပါပြီ.
2:13 ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နေဆဲအသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအဘယျသို့ဖွစျသညျ?"
2:14 ထိုအ Mattathias နှင့်သူ၏သားတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုတ်, သူတို့ haircloth နှင့်ကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်း, သူတို့သညျအလှနျမွညျတမျး.
2:15 မင်းကြီးသည်အန်တိုင်းကနေပေးပို့ခဲ့သူတွေကိုထိုအရပ်ဆီသို့ရောက် လာ. ,, immolate မှ Modin ၏မြို့သို့ပြေးသောသူတို့ကိုမင်းဇော်မှ, လောဗန်ကိုမီးရှို့ဖို့နှင့်, နှငျ့ဘုရားသခငျ၏တရားထဲကနေထွက်သွားဖို့.
2:16 အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏လူတို့သည်များစွာသောဝန်ခံသူတို့နှင့်ဆီသို့ရောက် လာ. ,. သို့သော် Mattathias နှင့်သူ၏သားတို့သည်မြဲမြံစွာနင်း.
2:17 နှင့်အန်ကနေပေးပို့ခဲ့တဲ့သူတွေ, ကိုတုံ့ပြန်, Mattathias ဖို့ကဆိုသည်: "ခင်ဗျားကအုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း, အလွန်ကြက်သရေနှင့်ဤမြို့တော်၌ကြီးသော, နှင့်သင်၏သားတို့နှင့်ညီအစ်ကိုတွေနဲ့တန်ဆာဆင်ထားပါသည်.
2:18 ထို့ကြောင့်, ချဉ်းကပ်နည်းပထမဦးဆုံး, နှင့်ရှင်ဘုရင်၏အမိန့် carryout, လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုပြုသကဲ့သို့, ယုဒအမျိုးနှင့်ယောက်ျား, ယေရုရှလင်မြို့၌ကြွင်းသောသူတို့အားနှင့်. သင်နှင့်သင်၏သားတို့သည်ရှင်ဘုရင်၏အဆွေအကြားဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်ရွှေ, ငွေနှင့်များစွာသောလက်ဆောင်နှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံ။ "
2:19 ထိုအ Mattathias တုန့်ပြန်, သူကတစ်ဦးကိုကြီးသောအသံနှင့်ကပြောပါတယ်: "လူအပေါင်းတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့ကိုရှင်ဘုရင်အန်စကားကိုနားထောငျရင်တောင်, အသီးအသီးပညတ်တော်အားမိမိသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်သဘောတူညီချက်၏ပညတ်တရား၏ဝန်ဆောင်မှုကနေထွက်ခွာနိုင်အောင်,
2:20 ငါနှင့်ငါ့သား, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေး၏တရားစကားကိုနားထောငျပါမညျ.
2:21 ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားခွင့်လွှတ်ရှိပါစေ. ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားတော်တို့နှင့်တရားသူကြီးစွန့်ခွာရန်အဘို့အဒါဟာအသုံးဝင်သောမဟုတ်ပါဘူး.
2:22 ကျနော်တို့ရှငျဘုရငျကိုအန်၏စကားကိုနားမထောငျပါမညျ, မဟုတ်သလိုကျနော်တို့ကိုပူဇျောပါမညျ, ငါတို့တရားသည်ပညတ်တရားကိုလွန်ကျူး၏, အခြားသောလမ်းပေါ်ထွက်တင်ထားရန်သကဲ့သို့။ "
2:23 နှင့်, သူသည်ဤစကားစကားပြောလွတ်ငြိမ်းသည်အဖြစ်, တယောယုဒလူ Modin မြို့၌ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာရုပ်တုအားယဇ်ပူဇော်ဖို့အပေါင်းတို့၏ရှေ့မှောက်၌ချဉ်းကပ်, ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်အရသိရသည်.
2:24 ထိုအ Mattathias ကိုမြင်လျှင်, ထိုကြောင့်စိတ်နာ, နှင့်သူ၏စိတ်နေစိတ်ထားတုနျလှုပျ, နှင့်သူ၏ဒေါသအမျက်သည်ပညတ်တရား၏စီရင်တော်မူခြင်းနှင့်အညီ enkindled ခဲ့သည်, နှင့်ပွင့်ခုန်, သူသည်ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာသူ့ကိုသတ်ကြ၏.
2:25 ထို့အပြင်, ရှငျဘုရငျကိုအန်စေလွှတ်တော်မူသောထိုလူ, အဘယ်သူသည် immolate မှသူတို့ကိုအနိုင်အထက်, သူတစ်ချိန်တည်းမှာသေဆုံးခဲ့ပြီး, သူသည်ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖျက်ဆီး,
2:26 နှင့်သူသည်ပညတ်တရားဘက်၌စိတ်အားကြီး, ဖိနဟတ်သည်ဇိမရိသည်ပြုသကဲ့သို့, Salomi ၏သား.
2:27 ထိုအ Mattathias မွို့တျောတှငျကွီးသောအသံနှငျ့ကွှေးကျွောခဲ့, ဟုဆို, "ဒီဥပဒေကအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကိုင်ထားသောသူအပေါင်းတို့သည်, ပဋိညာဉ်တရားကိုထိန်းသိမ်းခြင်း, သူတို့ကိုငါ့နောက်သို့လိုက်ကြကုန်အံ့။ "
2:28 သူနဲ့သူ၏သားတို့သည်တောင်ပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်, ထိုသူတို့သည်မြို့ကိုမခဲ့သမျှကိုကျန်ရစ်.
2:29 ထိုအခါတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်တရားမျှတမှုရှာသောသူအများအပြားတောသို့ဆင်း သွား..
2:30 ထိုသူတို့ကအဲဒီမှာစခန်းချ, သူတို့ရဲ့သားတို့နှငျ့အတူ, သူတို့ရဲ့ဇနီး, နှင့်၎င်းတို့၏နွားများ, ဘေးကသူတို့ကိုလွှမ်းမိသောကြောင့်.
2:31 ထိုသို့ရှင်ဘုရင်၏ယောက်ျားအစီရင်ခံခဲ့သည်, ယေရုရှလင်မြို့၌ပါသောတပ်, ဒါဝိဒ်၏မြို့အတွက်, ကြောင်းလူအခြို့တို့, အဘယ်သူသည်ရှင်ဘုရင်၏ပညတ်စကားကိုဖယ်ချပစ်ခဲ့, သဲကန္တာရထဲမှာ hidden သောနေရာများသို့ကြွခဲ့, များစွာသောသူတို့နောက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကွောငျး.
2:32 ထိုခဏ, သူတို့မှထွက် သွား., သူတို့ဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်တိုက်စီစဉ်ပေး, ဥပုသျနေ့၏နေ့၌.
2:33 ထိုသူတို့ကလညျး: "ယခုမှာ, သင်ဆဲခုခံတွန်းလှန်ကြပါ? ထွက် သွား. ရှင်ဘုရင်ကအန်၏စကားလုံးအရသိရသည်ပြုမူ, သင်တို့သည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ "
2:34 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ကထွက်မသွားပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့ရှငျဘုရငျ၏စကားလုံးပြုကြမည်မဟုတ်, ဥပုသျနေ့၏နေ့ကိုညစ်ညူးစေသကဲ့သို့။ "
2:36 ဒါပေမဲ့သူတို့ကတုန့်ပြန်ဘူး, မဟုတ်သလိုသူတို့မှာကျောက်ကိုနှငျထုတျခဲ့ပါ, မဟုတ်သလိုသူတို့က hidden သောအရပ်တို့ကိုမ barricade ခဲ့ပါ,
2:37 သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်, "ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်း၌သေပါစို့. နှင့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ငါတို့အဘို့ငါသက်သေခံပါလိမ့်မယ်, သငျသညျမတရားကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။ "
2:38 ဒီတော့သူတို့ဥပုသ်နေ့၌တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ထွက်သယ်ဆောင်. ထိုသူတို့ကအသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်အတူ, နှင့်သူတို့သား, နှင့်၎င်းတို့၏တိရစ္ဆာန်များ, ပင်ကိုလူတို့အထောင်အသောင်းစိတ်ဝိညာဉ်၏အရေအတွက်.
2:39 ထိုအ Mattathias နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကသည်ကြားလျှင်, သူတို့အဘို့အလွန်ကြီးသောမြည်တမ်းခြင်းကိုကျင်းပ.
2:40 အသီးအသီးမိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြောဆို၏, "ငါတို့ရှိသမျှသည်ညီအစ်ကိုတွေကိုပွုမိပါပွီနည်းတူပြုလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျှတမှု၏မျက်နှာကို ထောက်. တပါးအမျိုးသားတို့တဘက်၌မတိုက်ကြပါလျှင်, ထိုအခါသူတို့သည်အလျင်အမြန်မြေကြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပပျောက်ရေးလိမ့်မည်။ "
2:41 ထိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ထိုနေ့, ဟုဆို: "လူမည်သည်, အဘယ်သူသည်ဥပုသျနေ့၏နေ့၌စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်လာကြလိမ့်မည်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအတိုက်မည်. ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှအသေခံမည်မဟုတ်, ဝှက်ထားသောနေရာများ၌အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်တော်မူသောငါတို့၏ကညီအစ်ကိုတွေလိုပဲ။ "
2:42 ထိုအခါ Hasideans ၏တရားစရပ်သူတို့ရှေ့မှာရှိစုဝေးခဲ့ပါတယ်, ဣသရေလအမျိုးမှခိုင်မာတဲ့ယောက်ျား, ပညတ္တိကျမ်းများအတွက်အလိုတော်နှင့်အတူအသီးအသီး.
2:43 ထိုအခါဘေးထံမှပြေးသောသူအပေါင်းတို့သူတို့ကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့ကဆက်ပြောသည်, သူတို့တစ်ကြက်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
2:44 ထိုသူတို့ကအတူတူတစ်တပ်ကိုစုဝေးစေ, သူတို့အမျက်ထွက်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏ဒေါသအမကျြထဲမှာလူဆိုးတို့သည်ဒဏ်ခတ်. ထိုအခါအခြားသူများကိုအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်, မှလွတ်မြောက်ရန်သကဲ့သို့.
2:45 ထိုအ Mattathias နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကလှည့်ပတ်ခရီးထွက်, သူတို့ယဇ်ပလ္လင်များကိုဖျက်ဆီးပစ်.
2:46 ထိုသူတို့ကအပေါငျးတို့သရေဖျားလှီးခြင်းကိုယောက်ျားလေးများရေဖျားလှီးမင်္, ဣသရေလအမျိုး၏ကန့်သတ်အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ဘယ်သူကို, သူတို့အသည်းနှင့်အတူပြုမူ.
2:47 ထိုသူတို့ကမောက်မာ၏သားကို လိုက်., နှင့်အလုပ်သူတို့လက်၌သာယာဝပြောတဲ့ခဲ့သည်.
2:48 ထိုသူတို့ကတပါးအမျိုးသားတို့လက်မှပညတ်တိကမျြးရရှိသော, နှင့်ရှင်ဘုရင်တို့လက်မှ. ထိုသူတို့ကအပြစ်ဖို့ဦးချိုလက်နက်ချဘူး.
2:49 ထိုအခါရက်ပေါင်း Mattathias သေမယ်လို့ကျသောအခါချဉ်း ကပ်., သူသည်မိမိသားတို့အားကပြောပါတယ်: "အခုထောင်လွှားခြင်းနှင့်ဆုံးကိုခိုင်ခံ့စေပြီ, ထိုသို့တွန်းလှန်နှင့်အမျက်ဒေါသအမျက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်.
2:50 သို့ဖြစ်., အဆိုပါအသံ, ပညတ်တရား၏တုပဖြစ်, နှင့်သင်တို့၏ဘိုးဘေး၏ပဋိညာဉျဘို့အလိုငှါသင်တို့အသက်ပေး.
2:51 ထိုအခါဘိုးဘေးများ၏အကျင့်ကိုကျင့်စိတ်ထဲခေါ်, အရာတို့သည်မိမိတို့သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်ပြုကြပြီ. တဖန်သင်တို့အကြီးဘုန်းအသရေနှင့်ထာဝရနာမကိုအမှီလက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
2:52 အာဗြဟံသည်သွေးဆောင်မှု၌သစ္စာရှိသောဖြစ်မတွေ့ရှိခဲ့သည်, ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုအဖြစ်သူ့ကိုမှတ်?
2:53 ယောသပ်သည်, မိမိအဒုက္ခဆင်းရဲကာလ၌, ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်, သူသည်အဲဂုတ္တုအုပ်စိုးသောမင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်.
2:54 ဖိနဟတ်သည်ငါတို့အဘ, ဘုရားသခင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ခြင်း, ထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်၏ပဋိညာဉ်တရားကိုလက်ခံရရှိ.
2:55 ယရှေုသညျ, သူသည်စကားလုံးမပြည့်စုံပြီးကတည်းက, ဣသရေလအမျိုး၌တပ်မှူးခဲ့.
2:56 ကာလကျ, သူသည်ပရိသတ်၌သက်သေခံကတည်းက, အမွေလက်ခံရရှိ.
2:57 ဒါဝိဒ်သည်, မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်အတွက်, အားလုံးအစဉ်အဆက်များအတွက်နိုင်ငံတော်ရာဇပလ္လင်ရရှိသော.
2:58 ဧလိယသည်, သူသည်တရားတစ်ဦးဇွဲထက်သန်နှင့်အတူဘက်၌စိတ်အားကြီးပြီးကတည်းက, ကောင်းကင်သို့လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်.
2:59 ဟာနနိနှင့်အာဇရိနှင့်မိရှလေ, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်, မီးလျှံအထဲကနှုတ်ယူခဲ့ကြသည်.
2:60 ဒံယလေက, မိမိအရိုးရှင်းအတွက်, ခြင်္သေ့၏နှုတ်တော်ထွက်အထဲကနှုတ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်.
2:61 ဆိုတော့, ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, မျိုးဆက်တဆင့်သူ့ကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့၏မျိုးဆက်ပြီးနောက်, အဘယ်သူအားမျှခွန်အား၌မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါပြီ.
2:62 တစ်ပွစျရှိလူသား၏ကွောကျမကျမစကားများ, သူ၏ဘုန်းအဘို့နောက်ချေးနဲ့ worms ဖြစ်ပါသည်.
2:63 ယနေ့တွင်သူ extolled ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်မနက်ဖြန်သူကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်, သူသည်မိမိမြေသို့ပြန်ရောက်ခဲ့ပါသည်နှင့်သူ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်ပျောက်ပျက်ကြောင့်.
2:64 ထို့ကြောင့်, သငျသညျအမြိုးသားတို့, ခိုင်ခံ့စေပြီးတရား manfully ပြုမူခံရ. ကက, သငျသညျဘုနျးကွီးဖြစ်ရလိမ့်မည်.
2:65 ထိုအခါ, ငါသည်သင်တို့၏အစ်ကိုရှိမုန်ကိုအကွံဉာဏျ၏လူတယောက်သည်ကိုသိမှတ်. အမြဲသူ့ကိုနာ, သူသည်သင်တို့၏အဘဖြစ်လိမ့်မည်.
2:66 ယုဒ Maccabeus, အဘယ်သူသည်ငယ်သောအရွယ် မှစ. ခိုင်မာတဲ့နှင့်အရင်းအမြစ်များခဲ့, သူ့ကိုသင့်ရဲ့ပြည်သူ့စစ်များ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါစေ, သူသည်လူများ၏စစ်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်.
2:67 တဖန်သင်တို့ကိုယ်ကိုကိုယ်ပညတ္တိကျမ်းကိုစောငျ့ရှောကျသောသူအပေါင်းတို့ကိုထည့်သွင်းရကြလိမ့်မည်, နှင့်သင်သည်သင်၏လူမျိုး၏ဖြောင့်မတ်တောင်းဆိုကြမည်.
2:68 သူတို့ရဲ့လက်စားချေတပါးအမျိုးသားတို့ Render, နှင့်ပညတ်တရား၏ဥပဒသေမြားမှအာရုံစိုက်။ "
2:69 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, မိမိဘိုးဘေးတို့အားထည့်သွင်းခဲ့သည်.
2:70 သူသည်ထိုအတရာ့လေးဆယ်ဆဌမနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွား, မိမိဘိုးဘေးများ၏သင်္ချိုင်းထဲမှာသူ၏သားတို့အနေဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏, Modin အတွက်, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုတစ်ဦးအလွန်ညည်းတွားခြင်းနှင့်အတူသူ့အဘို့ငိုကြွေးမြည်တမ်း.
1 မက္ကဘီး 3
3:1 နှင့်သူ၏သားကိုယုဒ, Maccabeus အမည်ရှိသော, မိမိနေရာမှထ.
3:2 ထိုလူအပေါင်းတို့ကသူ၏ညီအစ်ကိုတို့ကိုသူ့ကိုကူညီ, သူ၏ဖခင်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သောသောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူ. ထိုသူတို့ကဝမ်းမြောက်နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှါစစ် တိုက်..
3:3 မိမိလူမျိုး၏ဘုန်းအသရေတိုးချဲ့, သူဧရာကဲ့သို့သောရင်ဖုံးနှင့်အတူမိမိကိုမိမိအဝတ်ကိုဝတ်, သူတိုက်ပွဲများအတွက်ကိုယ်တော်တိုင်စစ်၏သူ၏လက်နက်ဝိုင်းရံ, မိမိကိုထားနှင့်တပ်ကိုကာကှယျထား.
3:4 မိမိအလုပ်ရပ်များအတွက်, သူကခြင်္သေ့ကဲ့သို့ဖြစ်လာသည်, နှင့်အမဲလိုက်ခြင်းအတွက်ခြင်္သေ့ပျိုဟောက်သကဲ့သို့.
3:5 ထိုမင်းသည်မတရားသောသူကို လိုက်. သူတို့ကိုနှိမ့်ချခြေရာခံ. မိမိလူတို့ကိုနှောင့်အယှက်အဘယ်သူသည်ထို, သူလည်း မီးလောင်..
3:6 နှင့်သူ၏ရန်သူများကိုအထံတော်၌ကွောကျရှံ့ခွငျးအားဖွငျ့ဆုပျရှံခဲ့ကြသည်, နှင့်ဒုစရိုကျအပေါငျးတို့သလုပ်သားများနှောငျ့ရှကျခဲ့သညျ. နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်သူ၏လက်၌ကောင်းစွာညွှန်ကြားခဲ့သည်.
3:7 ထိုမင်းသည်များစွာသောရှင်ဘုရင်ကိုနှိုးဆျော, သူသည်မိမိအကျင့်အားဖြင့်ယာကုပ်အားဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုပေး၏, နှင့်သူ၏မှတ်ဥာဏ်အားလုံးစဉ်မြေးဆက်အဘို့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိလိမ့်မည်.
3:8 ထိုမင်းသည်ယုဒမြို့များမှတဆင့်ခရီးထွက်, သူသူတို့အထဲကမတရားသောသူတို့အတွက်ဖျက်ဆီးခံရ, သူသည်ဣသရေလအမျိုးထဲကနေအမျက်တော်သည်မငြိမ်း.
3:9 ထိုမင်းသည်ကျော်ကြားခဲ့သည်, ပင်ကိုမြေကြီးများ၏အစွမ်းကုန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ, သူဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုစုဝေးစေ၏.
3:10 ဒါ Apollonius တပါးအမျိုးသားတို့သည်စုဝေးလ, ရှမာရိမြို့ကနေတစ်ဦးမြောက်မြားစွာနှင့်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်းနှင့်တကွ, ဣသရေလအမျိုးတဘက်၌စစ်တိုက်ခြင်းငှါ.
3:11 ယုဒကအကြောင်းသိတယ်, သူကသူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါထှကျသှား. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုလုပ်ကြံခြင်းနှင့်သူ့ကိုသတ်ပစ်. လူအမြားတို့ဒဏ်ရာရပြပ်ဝပ်, ဖြစ်ပြီးကျန်ပွေး.
3:12 ထိုမင်းသည်မိမိတို့၏ဥစ္စာပယ်ရှင်းပြီ. ယုဒ Apollonius ၏ထားသိမ်းယူ, သူအပေါငျးတို့သလက်ထက်တော်ကာလအတွင်းကတိုက်.
3:13 ထိုအ Seron, ဆီးရီးယား၏ဗိုလ်ခြေ၏ခေါင်းဆောင်, ယုဒရှထိုသခင်နှင့်အတူသစ္စာရှိတစ်ဦးကုမ္ပဏီနှင့်စည်းဝေးပွဲကိုစုဝေးစေခဲ့ကွောငျးကိုကွား.
3:14 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ငါသည်ကိုယ်အဘို့နာမည်တစ်ခုစေမည်, ငါနိုငျငံတျော၌ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလိမ့်မည်, ငါစစ်ဆင်ရေးအတွက်ကိုယုဒအနိုင်ယူပါလိမ့်မယ်, သူနှင့်အတူနေသောသူတို့ကို, သူသည်ရှင်ဘုရင်၏အမိန့်တော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုပြီ။ "
3:15 ထိုမင်းသည်မိမိကိုမိမိကိုပြင်ဆင်. ထိုအခါမတရားသောသူတို့အတွက်တပ်ယျတျောနှငျ့အတူတက်သွားလေ၏, ခိုင်မာတဲ့ auxiliary နှင့်အတူ, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အပြစ်နှင့်အလျောက်စီရင်နှင့်ပြုမူသကဲ့သို့.
3:16 ထိုသူတို့နည်းတူဝေးဗေအဖြစ်ချဉ်းကပ်. ယုဒကသူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါထှကျသှား, အနည်းငယ်ယောက်ျားနှင့်အတူ.
3:17 ဒါပေမဲ့သူတို့ကစစ်တပ်ကသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာမယ့်မြင်သောအခါ, သူတို့ကိုယုဒကလည်း,, "ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဒါခိုင်မာတဲ့အလုံးအရင်းဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့အနည်းငယ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အစာရှောင်ခြင်းဖြင့်အားနည်းလျက်ရှိသည်ကိုပင်သော်လည်း?"
3:18 ယုဒကဆိုပါတယ်: အများအပြားအနည်းငယ်၏လက်၌ပူးတွဲခံရဖို့အတှကျ "ဒါဟာလွယ်ကူသည်, အများသောအားဖွငျ့လှတျမွောကျကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ရှိဘို့, သို့မဟုတ်အနည်းငယ်အားဖွငျ့.
3:19 စစ်ဆင်ရေးအတွက်အောင်ပွဲများအတွက်စစ်တပ်၏အလုံးအရင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ခွန်အား၌ကောင်းကင်ကနေ.
3:20 သူတို့ကတစ်ဦးထီလေးစားပြုသောလူအစုအဝေးနှင့်ခိုင်ခံ့သောစိတ်နှင့်ငါတို့ကိုရန်လာ, ကျွန်တော်တို့ကိုမဖကျြဆီးနိုင်ရန်အတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မယားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သားတို့နှငျ့အတူ, ငါတို့ကိုလုယူရန်.
3:21 အမှန်တရားမှာ, ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၏ကိုယ်စားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေများကိုအပေါ်တိုက်မည်.
3:22 ထိုအခါထာဝရအရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာရှေ့တော်၌နှိပ်စက်တော်မူမည်. သို့သော်သင်တို့အဘို့အအဖြစ်, သူတို့ကိုမကြောက်ရွံ့ကြဘူး။ "
3:23 ထိုသို့မကြာမီသူစကားပြောစဲခဲ့သကဲ့သို့, သူကရုတ်တရက်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့. ထိုအ Seron နှင့်မိမိတပ်ရှေ့တော်၌ကြေမွခဲ့ကြ.
3:24 ထိုမင်းသည်ဗေဒနွယ်ဖွားကနေသူ့ကိုလိုက်, ပင်လွင်ပြင်. ထိုသူတို့၏ယောက်ျား၏ရှစ်ရာခုတ်လှဲခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ကြွင်းသောဖိလိတ္တိပြည်သို့ပြေး.
3:25 ယုဒ၏ထိုအကြောက်ကြောက်, အဖြစ်ကသူ့အစ်ကိုတွေ, သူတို့ကိုလှည့်ပတ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအပေါ်သို့သက် ရောက်..
3:26 သူ၏နာမကိုပင်သည်ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ရောက်ရှိ, လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုယုဒ၏တိုက်ပွဲ၏ပုံပြင်များကိုပြောသည်.
3:27 သို့သော်ရှင်ဘုရင်ကအန်ကဤအကောင့်ကိုကြားသည့်အခါ, သူသညျမိမိကိုအလွန်စိတ်ဝိညာဉ်၌အမျက်ထွက်ခဲ့သည်. မိမိတစျခုလုံးကိုနိုငျငံတျောသညျကနေတပ်ဖွဲ့တွေကိုစေလွှတ်မှာစုဝေး, အလွန်အားကောင်းတဲ့စစ်တပ်.
3:28 မိမိဘဏ္ဍာတိုက်ကိုဖွင့်, သူတစ်နှစ်တပ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးထုတ်ပေးခဲ့သည်. ထိုမင်းသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအဘို့အဆင်သင့်ပါစေခြင်းငှါသူတို့အမိန့်တော်အတိုင်း.
3:29 မိမိဘဏ္ဍာကိုကနေပိုက်ဆံပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းကိုသိမြင်, နှင့်တိုင်းပြည်၏အခွန်အသေးခဲ့, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခြင်းများနှင့်သူသည်တရားဝင်ဥပဒေများကိုပယ်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောစေသောခဲ့ကွောငျးဘေး၏, ပထမဦးဆုံးရက်ပေါင်းကတည်းကဖြစ်ခဲ့သော.
3:30 ထိုမင်းသည်ကိုကွောကျရှံ့, သူကပထမဦးဆုံးအဖြစ်အလုံအလောက်ဒုတိယအကြိမ်ရှိသည်မဟုတ် စိုးရိမ်., ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်လက်ဆောင်များများအတွက်, ပေးသောသူတစ်ဦးလစ်ဘရယ်လက်နှင့်အတူမတိုင်မီပေးထားခဲ့သည်. မိမိအအလွန်အကျွံအဘို့သူ့ရှေ့မှာဘူးသောရှင်ဘုရင်တို့ထက်ပိုခဲ့ကြ.
3:31 မိမိသည်အလွန်စိတ်ဝိညာဉ်၌အုတ်အုတ်သဲသဲခဲ့သည်, သူရှားသို့သွားရန်ရည်ရွယ်, နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယူ, နှင့်အတူတကွအများကြီးပိုက်ဆံစုဆောင်းရန်.
3:32 ထိုမင်းသည်လုသိကျန်ရစ်, တော်ဝင်မိသားစု၏ယ့်မင်းသား, ဥဖရတ်မြစ်ထဲကနေနိုင်ငံတော်ကိုကျော်ဦးမှ, ပင်အဲဂုတ္တုမြစ်မှ,
3:33 နှင့်သားတော်ပြုစုပျိုးထောင်, အန်, သူပြန်လာလိမ့်မယ်သည်အထိ.
3:34 ထိုမင်းသည်သူ့ကိုစစ်တပ်က၏ထက်ဝက်လွှဲပြောင်းပေးအပ်, နှင့်ဆင်. သူလိုခငျြသမြှသောအရာမှာသူ့ကိုမှာထားတော်မူ, နှင့်ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုရည်မှတ်:
3:35 သူနှိပ်စက်ရန်နှင့်ဣသရေလအမျိုး၏သီလနှင့်ယေရုရှလင်၏အကြွင်းအကျန်ထွက် root သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ကာစစ်တပ်ကိုပေးပို့မယ်လို့ဒါ, နှင့်သောအရပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်ကိုပယ်ရှားဖို့,
3:36 ဒါသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်နိုင်ငံခြားသားတွေ၏၏သားတို့အဘို့အိမ်များတည်ထောင်ရန်မယ်လို့, နှင့်စာရေးသူတို့၏မြေကိုဖြန့်ဝေမယ်လို့.
3:37 ဆိုတော့, ရှင်ဘုရင်သည်စစ်တပ်များ၏ကျန်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းကို ယူ. ,, သူအန္တိအုတ်မြို့သို့မှထွက် သွား., သူ၏နိုင်ငံကို၏မြို့, တရာလေးဆယ်သတ္တမနှစ်တွင်. ထိုမင်းသည်ဥဖရတ်မြစ်ကူး, သူသည်အထက်ဒေသများမှတစ်ဆင့်ခရီးထွက်.
3:38 ထိုအခါလုသိတော်လမီရှေးခယျြခဲ့, Dorymenes ၏သား, Nicanor နှင့် Gorgias နှင့်, ရှငျဘုရငျ၏မိတ်ဆွေများကအထဲမှအစွမ်းထက်ယောက်ျား.
3:39 ထိုမင်းသည်လေးသောင်းယောက်ျားနှင့်အတူသူတို့ကိုစလှေတျတျော, ခုနစ်ထောင်မြင်းစီးသူရဲ, ယုဒပြည်သို့ဝငျ, ထိုသို့ဖျက်ဆီးဖို့, ရှင်ဘုရင်၏စကားလုံးအရသိရသည်.
3:40 ဆိုတော့, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့တန်ခိုးနှင့်ဆက်လက်, သူတို့ရောက်လာပြီး Emmaus အနီးရှိအနေအထားကို ယူ. ,, လွင်ပြင်ပြည်၌.
3:41 ထိုအခါဒေသကုန်သည်တို့သည်သူတို့နာကြား၏. ထိုသူတို့ကသိပ်ငွေအယူ, ရွှေနှင့်, ကျွန်ခံ, သူတို့ကျွန်သို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မယူနိုင်ရန်စခန်းသို့ကြွတော်မူ. နှင့်ဆီးရီးယားမှနိုင်ငံခြားသားများအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်ကနေဗိုလ်ခြေသူတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်.
3:42 ယုဒနှင့်သူ၏ညီအစျဘေးကိုများပြားစေခံခဲ့ကြသည်ကိုငါသိမြင်၏, နှင့်ဗိုလ်ခြေ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်အနီးတွင်နေရာချထားခဲ့ကြောင်း. ထိုသူတို့သည်ရှင်ဘုရင်၏စကားသိတယ်, လူအသေသတ်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်ရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးခံရဖို့အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့.
3:43 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမှတစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း, "ငါတို့လူမျိုးရဲ့စိတ်ပျက်အားငယ်စွာသက်သာရာကြစို့, ငါတို့လူမျိုးနှင့်ငါတို့သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုကိုယ်စားကိုတိုက်ကြကုန်အံ့။ "
3:44 ထိုအစည်းဝေးပွဲမှာစုဝေးခဲ့ပါတယ်, သူတို့စစ်တိုက်ဘို့ပြင်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ, သူတို့ဆုတောင်းပဌနာနှင့်ကရုဏာနဲ့သနားကရုဏာကိုတောင်းခံနိုင်အောင်.
3:45 အခုတော့ဂျေရုဆလင်စည်ပင်မခံခဲ့ရ, ဒါပေမယ့်တောကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်. သူမ၏ကလေးများထဲမှထဲသို့ဝင်သို့မဟုတ်မထွက်သူကိုအဘယ်သူမျှမရှိခဲ့သည်. ထိုအခါသန့်ရှင်းရာဌာနအပေါ်သို့နင်းခဲ့သည်, နှင့်နိုင်ငံခြားသားများ၏သားရဲတိုက်၌ရှိ. ဤအရပျတပါးအမျိုးသားတို့၏နေရာကိုခဲ့သည်. နှင့်မွေ့လျော်ယာကုပ်ထံမှယူသှားခဲ့သညျ, နှင့်ပုလွေများနှင့်စောင်းကိုတီး၏ဂီတကြောင်းအရပျ၌စဲ.
3:46 ထိုသူတို့က, စုဝေးနှင့်မိဇပါမြို့သို့ရောက်လေ၏, ဂျေရုဆလင်ဆန့်ကျင်ဘက်. ဆုတောင်းပဌနာတစ်နေရာကိုမိဇပါမြို့၌ရှိ၏, ယခင်ဣသရေလအမျိုး၌.
3:47 ထိုနေ့၌အစာရှောင်, သူတို့ haircloth နှင့်ကိုယ်ကိုဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိ, သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာပြာကိုနေရာချ, သူတို့အဝတ်ကိုဆုတ်.
3:48 ထိုသူတို့ကပညတ်တရား၏အစာအုပ်တွေဖွင့်လှစ်ထားကြ၏, တပါးအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့ရုပ်တု၏သဏ္ဍာန်ကိုရှာဖွေရသော.
3:49 ထိုသူတို့ယဇ်ပုရောဟိတ်အဆင်တန်ဆာယူဆောင်, နှင့်ပထမဦးဆုံးအသီးနှင့်ဆယ်ဘို့တဘို့, သူတို့သည်နာဇရိလူထ, သူတို့နေ့ရက်ကာလမပွညျ့စုံခဲ့သော.
3:50 ထိုသူတို့ကကောင်းကင်သို့ကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, ဟုဆို: "ကျနော်တို့ကဤနှငျ့အဘယျသို့ပွုရပါမညျ, အဘယ်မှာကျနော်တို့ကသူတို့ကိုယူရမည်?
3:51 သင့်ရဲ့အဘို့သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကိုနင်းမိခြင်းနှင့်ညစ်ညူးခြင်းခံခဲ့ရပြီ, နှင့်သင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်စိတ်မသာညည်းတွားနှင့်အရှက်အတွက်ပါပြီ.
3:52 ထိုအခါ, အဆိုပါနိုင်ငံများအသင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင် စုဝေး., ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့. သငျသညျသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ရည်ရွယ်အရာကိုသိ.
3:53 ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့မျက်နှာရှေ့မှာရပ်နိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်, သငျသညျမဟုတ်လျှင်, အိုဘုရားသခင်, ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ?"
3:55 ထိုနော, ယုဒလူမျိုးကိုစိုးတပ်မှူးများအဖြစ်ခန့်အပ်: ထောင်ပေါင်းများစွာသောကျော်, နှင့်ရာပေါင်းများစွာကျော်, ငါးဆယ်ကျော်, နှင့်သောင်းချီကျော်.
3:56 ထိုမင်းသည်အိမ်များကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအားဆို၏, သို့မဟုတ်မယားတို့ကိုအကြင်သူ, စပျစ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူ, သို့မဟုတ်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြောက်ရွံ့ကြတဲ့သူ, သူတို့ပြန်လာသင့်ကြောင်း, မိမိအိမျမှတစျဦးစီ, ဥပဒေနှင့်အညီ.
3:57 ဒါကြောင့်သူတို့ကစခန်းပြောင်းရွှေ့, နှင့် Emmaus ၏တောင်ဘက်မှပြောင်းရွှေ့.
3:58 ယုဒကဆိုပါတယ်: "ကိုယ်အဘို့ကိုယ်ကိုစည်းလော့, နှင့်အာဏာ၏သားဖြစ်, နံနက်ယံ၌လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆန့်ကျင်စုဝေးထားသောဤလူမျိုးတို့ကိုတိုက်စေခြင်းငှါဒါ, ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သန့်ရှင်းသောအရာတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့သကဲ့သို့.
3:59 သည်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တိုက်ရာတွင်သေသည် သာ. ကောင်း၏, ဘေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးနှင့်သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုမထံသို့လာကြည့်ဖို့ထက်.
3:60 သို့သော်ငြားလည်း, ကကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူပါတ်ခံရကြလိမ့်မည်အဖြစ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါစေ။ "
1 မက္ကဘီး 4
4:1 ထိုအခါ Gorgias လူငါးထောင်နှင့်တထောင်ရှေးခယျြသောမြင်းစီးသူရဲကိုယူ, သူတို့ညဉ့်အခါစခန်းထဲကပြောင်းရွှေ့,
4:2 သူတို့သညျယုဒတပ်ကိုအပေါ်သို့သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်. ထိုအခါရဲတိုက်ထဲကနေခဲ့ကြသူ၏သားတို့သည်၎င်းတို့၏လမ်းပြခဲ့ကြ.
4:3 ယုဒသည်ကြားလျှင်, သူသည်ထ, မိမိအအစွမ်းထက်ယောက်ျားနှင့်အတူ, Emmaus ၌ပါသောရှငျဘုရငျ၏စစ်တပ်အနေဖြင့်အင်အားသုံးဒဏ်ခတ်ဖို့.
4:5 ထိုအ Gorgias ညဉ့်အခါ လာ. ,, ယုဒ၏တပ်သို့, အဘယ်သူမျှမတွေ့ရှိရ, သူတောင်ပေါ်မှာသူတို့ကိုရှာသောအခါ. ဟုသူကပြောသည်များအတွက်, "ဒီလူတို့သည်ငါတို့ထံမှပြေး။ "
4:6 ထိုသို့နေ့ကဖြစ်လာပြီးမှ, ယုဒရှမှသာသုံးထောင်ယောက်ျားနှင့်အတူလွင်ပြင်၌ထငျရှား, အဘယ်သူသည်မကိုလက်နက်မရှိ, ဓားခဲ့.
4:7 ထိုသူတို့တပါးအမျိုးသားတို့၏စခန်း၏ခွန်အားကိုငါမြင်၏, လက်နက်နှင့်လူတို့သညျ, နှင့်မြင်းစီးသူရဲသူတို့ကိုပတျဝနျးကငျြ, ဤစစ်တိုက်ခြင်းငှါလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့.
4:8 ယုဒယျတျောနှငျ့အတူရှိနသောသူလူတို့သညျအားဆို၏: "သူတို့လူအစုအဝေး၏မစိုးရိမ်, နှင့်သူတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကြောက်ပါဘူး.
4:9 အဘယ်သို့သောလမ်းကယျတငျတျောမူခွငျးကိုသတိရပါဧဒုံပင်လယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဘိုးဘေးတို့ဆီသို့ရောက် လာ. ,, ဖါရောမင်းသည်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်းနှင့်တကွသူတို့ကိုလိုက်သည့်အခါ.
4:10 နှင့်ယခု, ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်သို့အော်ဟစ်ကြကုန်အံ့, နှင့်သခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသနားတျောမူပါဦးမည်, သူငါတို့ဘိုးဘေးများ၏ပဋိညာဉ်တရားကိုအောက်မေ့မည်, သူကဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာမတိုင်မီဒီစစ်တပ်ကနှိပ်စက်တော်မူမည်.
4:11 နှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ဣသရေလအမျိုးရွေးခြင်းနှင့်လွှတ်ပေးခြင်းသောသူရှိကွောငျးသိရကြလိမ့်မည်။ "
4:12 ထိုအခါနိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့မျက်စိချီ, သူတို့ဆန့်ကျင်လာမယ့်သူတို့ကိုမွငျလြှငျ.
4:13 ထိုသူတို့ကစစ်တိုက်ထဲသို့စခန်းကထွက်သွား, ယုဒနှင့်အတူရှိတဲ့သူတွေကိုတံပိုးမှုတ်.
4:14 ထိုသူတို့ကစုဝေးရောက်လာကြ၏. တပါးအမျိုးသားတို့သည်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောခဲ့သည်, သူတို့လွင်ပြင်သို့ပြေး.
4:15 သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့၏နောက်ဆုံးထားလက်နက်ဖြင့်ကျဆင်း, သူတို့ပင် Gazara မှသူတို့ကိုလိုက်, ပင် Idumea လွင်ပြင်မှ, နှင့် Azotus, နှင့် Jamnia. ထိုအရပ်၌သူတို့ထံမှအဖြစ်အများအပြားထောငျသုံးအဖြစ်ယောက်ျားကျဆင်း.
4:16 ယုဒပြန်ရောက်, မိမိတပ်သူ့ကိုအောက်ပါနှင့်အတူ.
4:17 ထိုမင်းသည်ကိုလူများတို့အားဆို၏: "ဟုအဆိုပါဥစ္စာကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်မထားပါနဲ့; စစ်ငါတို့ရှေ့မှာလည်းမရှိအဘို့.
4:18 ထိုအ Gorgias နှင့်မိမိတပ်တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအနီးများမှာ. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်ယခုခိုငျအမာရပျတညျ, သူတို့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်, သငျတို့သနောက်မှဥစ္စာကိုယူကြမည်, လုံလုံခြုံခြုံ။ "
4:19 ယုဒသည်ဤစကားစကားပြောနေစဉ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သည်ထင်ရှားသူတို့ထဲကအချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, တောငျပျေါမှထွက်ရှာဖွေနေ.
4:20 ထိုအ Gorgias မိမိလူတို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှထားခဲ့ကြသည်ကြောင်းကိုသိမြင်, သူတို့တပ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြကြောင်း. သူဖွစျခဲ့ပွီးအဘယ်အရာကိုကြေငြာမြင်ဘူးသောမီးခိုးများအတွက်.
4:21 သူတို့ကဒီကိုတှေ့မွငျသောအခါ, သူတို့ကအရမ်းကြောက်လန့်ဖြစ်လာခဲ့သည်, ယုဒနှင့်လွင်ပြင်၌မိမိတပ်နှစ်ဦးစလုံးသည်စစ်တိုက်လုပ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်တစ်ချိန်တည်းမှာမြင်နေ.
4:23 ယုဒတပ်ကို၏ဥစ္စာကိုယူခြင်းငှါပြန်လာသော, သူတို့အများကြီးရွှေငွေရရှိသော, နှင့် hyacinth, နှင့်ပင်လယ်ခရမ်းရောင်, နှင့်လောက်ကြီးစွာသောစည်းစိမ်.
4:24 ထိုအပြန်လာသော, သူတို့တစ်တွေ canticle သီဆိုခဲ့, သူတို့သညျကောငျးကငျဘုံ၌ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, ကောင်းမြတ်တော်မူသောကွောငျ့, မိမိသနားခြင်းကရုဏာတော်တိုင်းမျိုးဆက်နှင့်အတူကြောင့်.
4:25 ဆိုတော့, အလွန်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ထိုနေ့တွင်ဣသရေလအမျိုး၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်.
4:26 သို့သော်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူနိုင်ငံခြားသားများအကြားရှိသူများဖြစ်ပျက်သမျှ သွား. လုသိမှအစီရင်ခံသည်.
4:27 ထိုမင်းသည်ဤအရာများကိုကြားရသောအခါ, သူကစိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့ပါတယ်, မိမိအကအလွန်စိတ်ဝိညာဉ်၌အုတ်အုတ်သဲသဲခံရ. အမှုအရာသည်သူ၏ဆန္ဒကိုအညီဣသရေလအမျိုး၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘူးများအတွက်, မရှငျဘုရငျကိုမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း,.
4:28 နှင့်, နောက်တစ်နှစ်အတွက်, လုသိခြောက်ဆယ်တထောင်ရှေးခယျြသောယောက်ျားနဲ့ငါးထောင်မြင်းစီးသူရဲစုဝေးလ, သူကစစ်ဆင်ရေးအတွက်သူတို့ကိုအနိုင်ယူအံ့သောငှါဒါ.
4:29 ထိုသူတို့ကယုဒပြည်သို့ကြွတော်မူ, သူတို့ Bethzur အတွက်သူတို့တပ်နေရာ, ယုဒလူတသောင်းနှင့်တကွသူတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး.
4:30 ထိုသူတို့ကစစ်တပ်များ၏အစွမ်းသတ္တိကိုမွငျလြှငျ, ဒါသူကဆုတောင်းပဌနာ, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "မင်္ဂလာရှိသင်, ဣသရေလအမျိုး၏ကယ်တင်ရှင်, အဘယ်သူသည်ကိုယ်တော်ကျွန်ဒါဝိဒ်၏လက်ဖြင့်အင်အားကြီးများ၏ချေမှုန်းရေးကိုဖိ, သူယောနသန်၏လက်သို့နိုင်ငံခြားသားများတပ်အပ်, ရှောလု၏သား, နှင့်သူ၏လက်နက်ဆောင်လုလင်.
4:31 သင်၏လူများတို့လက်၌ဣသရေလအမျိုး၌ဤစစ်တပ်ခိုင်ခံ့, သူတို့စစ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြင်းစီးသူရဲအတွက်ရှက်ကြောက်ခြင်းကိုခံကြစေ.
4:32 ကွောသူတို့နှင့်အတူရိုက်, နှင့်သူတို့၏အစွမ်းသတ္တိ၏ရဲရငျ့စှာကွာအရည်ပျော်, သူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းအတွက်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပါစေ.
4:33 သငျသညျကိုချစ်သောသူတို့အားသာ၏သန်လျက်နှင့်သူတို့ကိုနှိမ့်ချ, သင်၏နာမကိုသိသောသူအပေါင်းတို့သည်ဓမ္မသီချင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံ့။ "
4:34 ထိုသူတို့ကစစ်တိုက်ခြင်းငှါထွက် သွား., အဲဒီမှာလုသိ၏ဗိုလ်ခြေအနေဖြင့်လူငါးထောင်ကျဆင်း.
4:35 သို့သော်လုသိ, သူတို့ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ယုဒအမျိုး၏ရဲရင့်ကိုမြင်လျှင်, သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အသည်းနှင့်အတူအသေခံရန်ဖြစ်စေပွငျဆငျခဲ့, အန္တိအုတ်မြို့သို့ သွား. စစ်သားကို ရွေးချယ်., သူတို့ သာ. ကြီးမြတ်နံပါတ်များနှင့်အတူပြန်ယုဒပြည်မှလာအံ့သောငှါဒါ.
4:36 ထိုအခါယုဒနှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများကပြောပါတယ်: "အကယ်, ငါတို့ရန်သူနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရကြပြီ. ကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောအရပ်ကင်းစင်စေခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးယခုတက်သွားကြကုန်အံ့။ "
4:37 ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကစုဝေးစေ၏, ထိုသူတို့သည်ဇိအုန်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြွ.
4:38 ထိုသူတို့ကသန့်ရှင်းရာဌာနစွန့်ပစ်ကိုမြင်လျှင်, နှင့်ယဇ်ပလ္လင်တို့ကိုရှုတ်ချ, နှင့်တံခါးတို့ကိုမီးရှို့ကြ၏, နှင့်ပေါင်းပင်တရားရုံးတက်ကြီးထွားလာ, သစ်တောထဲမှာရှိသကဲ့သို့သို့မဟုတ်တောင်ရိုးပေါ်မှာအဖြစ်, နှင့် adjoining အခန်းများဖြိုဖျက်.
4:39 ထိုသူတို့ကမိမိတို့အဝတ်ကိုဆုတ်, နှင့်သူတို့တစ်တွေအကြီးအမြည်တမ်းလုပ်, သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာပြာကိုနေရာချ.
4:40 ထိုသူတို့ကသူတို့၏မျက်နှာများပေါ်တွင်မြေပြင်မှပြုတ်ကျ, သူတို့နှိုးဆော်သံ၏တံပိုးမှုတ်, သူတို့သညျကောငျးကငျဘုံဆီသို့အော်ဟစ်.
4:41 ထိုအခါယုဒရဲတိုက်၌ရှိသောသူတို့အားဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ဖို့ယောက်ျားရေတွက်, သူတို့အဘို့သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုစင်ကြယ်စေခဲ့ချိန်အထိ.
4:42 ထိုမင်းသည်အပြစ်မပါသောယဇ်ပုရောဟိတ်ကို ရွေးချယ်., အဘယ်သူ၏အလိုတော်ကိုဘုရားသခငျ၏တရားကျင်းပ.
4:43 ထိုသူတို့အဘို့သန့်ရှင်းသောအရပ်တို့ကိုစင်ကြယ်စေ, သူတို့ညစ်ညူးသောအရပ်မှအညစ်အကြေး၌ရှိသောကျောက်စပယ်ရှင်းပြီ.
4:44 ထိုမင်းသည်မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်စဉ်းစား, အရာတို့ကိုရှုတ်ချခဲ့, သူကလုပျသငျ့အရာကိုအဖြစ်.
4:45 ထိုအကောင်းတစ်ဦးအကွံဉာဏျသူတို့အပေါ်သို့ပြုတ်ကျ, ကဖကျြဆီးဖို့, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ် စိုးရိမ်., တပါးအမျိုးသားတို့သည်ညစ်ညူးစေသောကြောင့်အ; ဒါကြောင့်သူတို့ကဖြိုဖျက်.
4:46 ထိုသူတို့ကတောင်တော်အိမ်တော်၌ကျောက်များသိုလှောင်ထား, တစ်လျောက်ပတ်သောအရပ်ထဲမှာ, ပရောဖကျတအဲဒီမှာလာသင့်ပါတယ်သည်အထိ, သောဤသူအကြောင်းကိုအဖြေပေးလိမ့်မယ်.
4:47 ထိုအခါသူတို့ကမြေတပြင်လုံးကျောက်ခဲတို့ကို ယူ. ,, ဥပဒေနှင့်အညီ, သူတို့အသစ်တစ်ခုကိုယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်, မပြုမီသောအညီ.
4:48 ထိုသူတို့အဘို့သန့်ရှင်းသောအရပ်နှင့်ဗိမာန်တော်၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများရှိကြ၏သောအရာတို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, သူတို့ဗိမာနျတျောကိုသန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်တရားရုံးများ.
4:49 ထိုသူတို့ကအသစ်အဘို့သန့်ရှင်းသောတန်ဆာများ, သူတို့မီးခုံယူဆောင်, နံ့သာပေါငျးရာယဇ်ပလ္လင်, နှင့်ဗိမာန်တော်သို့စားပွဲပေါ်မှာ.
4:50 ထိုသူတို့ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာနံ့သာပေါင်းကိုနေရာချ, သူတို့သည်မီးခွက်တို့ကို lit, သောမီးခုံပေါ်ခဲ့ကြ, သူတို့ဗိမာန်တော်၌အလင်းကို ပေး..
4:51 ထိုသူတို့ကစားပွဲပေါ်မုန့်ကိုနေရာချ, သူတို့ကုလားကာကိုတက်ချိတ်ဆွဲ, သူတို့သည်မိမိတို့စတင်ခဲ့သမျှသောအမှုတော်တို့ကိုပြီးစီး.
4:52 ထိုသူတို့သညျနံနကျသညျထ်ရှေ့တော်၌, နဝမလနှစ်ဆယ်ပဉ်စမနေ့၌, (Kislev ၏တစ်လအရာဖြစ်ပါသည်) တဦးကိုတရာနဲ့လေးဆယ်-အဋ္ဌမနှစ်တွင်အတွက်.
4:53 ထိုသူတို့သညျယဇျပူဇျော, ဥပဒေနှင့်အညီ, သူတို့လုပ်သောမီးရှို့သစ်ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာ.
4:54 ထိုအချိန်ကာလ၏အဆိုအရနေ့သည်နှင့်အညီ, တပါးအမျိုးသားတို့သည်ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းခဲ့သောပေါ်, ထိုနေ့ရက်တွင်, ဒါကြောင့် canticles နှင့်အတူသက်တမ်းတိုးခဲ့သည်, နှင့်တယော, နှင့်တီးသောစောင်း, နှင့်လင်းကွင်း.
4:55 နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့မျက်နှာပေါ်မှာလှဲ, သူတို့က adored, သူတို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, မိုဃ်းကောင်းကင်သို့, သူတို့ကိုအကြံထမြောက်တတ်ခဲ့သောသူ၏.
4:56 ထိုသူတို့ကရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုအနုမောဒနာပြုပြီးထားရှိမည်, သူတို့ကဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်မီးရှို့ကိုကမ်းလှမ်း, နှင့်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်း၏ယဇျပူဇျော.
4:57 ထိုသူတို့ကရွှေအသရဖူနှင့်အသေးစားဒိုင်းလွှားနှင့်အတူဗိမာန်တော်၏မျက်နှာကိုဆင်. ထိုသူတို့မြို့တံခါးတို့ကိုနှင့် adjoining အခန်းများတို့သည်ဆက်ကပ်အပ်နှံ, သူတို့အပေါ်တံခါးရွက်ကို set up.
4:58 ထိုအခါလူတို့တွင်အလွန်ကြီးသောဝမျးမွောကျရှိ၏, နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့၏အရှက်တကွဲအကျိုးရှောင်ခဲ့သည်.
4:59 ယုဒ, နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကို ယူ. ယဇ်ပလ္လင်၏အနုမောဒနာပြုပြီး၏နေ့က၎င်း၏အချိန်အတွက်ထားရှိမည်ရမညျဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်, တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်မှ, ရှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌အဘို့, Kislev ၏လနှစ်ဆယ်-ပဉ်စမနေ့ထဲကနေ, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်.
4:60 ထိုသူတို့ကတက်ဆောကျ, ထိုအချိန်မှာ, ဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ, ပတ်လည်မြင့်မားသောနံရံများနှင့်ခိုင်ခံ့သောတာဝါတိုင်နှင့်အတူ, တပါးအမျိုးသားတို့သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မလာနဲ့အပေါ်မှာနင်းသင့်တယ် စိုးရိမ်., သူတို့မရောက်မီပြုသကဲ့သို့.
4:61 ထိုအရပ်၌တစ်တပ်တပ်စွဲ, စောင့်ရှောက်စေခြင်း, သူကခိုင်ခံ့သော, Bethzur စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်, လူအ Idumea ၏မျက်နှာကိုဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခံတပ်ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါ.
1 မက္ကဘီး 5
5:1 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ပတျဝနျးကငျြလူမျိုးရှေ့မှာအဖြစ်ကိုယဇ်ပလ္လင်နှင့်သန့်ရှင်းသောပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ကြကြောင်းကိုကြားလျှင်, သူတို့အလွန်အမျက်ထွက်တော်မူခဲ့ကြ.
5:2 ထိုသူတို့ကသူတို့တွင်ဖြစ်ကြောင်းယာကုပ်အမျိုး၏ကလူကိုဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်, သူတို့ပြည်သူပြည်သားအချို့သတ်ပစ်စတင်, သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲနှင်ထုတ်ဖို့.
5:3 ထိုအခါယုဒရှစစ်ဆင်ရေးအတွက် Idumea အတွက်ဧသော၏သားရှုံး, Akrabattene ၌နေသောသူတို့, သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့မြို့ကိုဝိုင်းထားသောကြောင့်,, သူကြီးအကွိမျဒဏျသူတို့နှင့်အတူလုပ်ကြံ.
5:4 ထိုမင်းသည် Baean ၏သား၏ငြိုးကိုအောကျမေ့, လူတစ်ဦးကျော့ကွင်းနှင့်တစ်ဦးအရှုပ်တော်ပုံတဲ့သူခဲ့ကြသည်, လမျး၌သူတို့အဘို့အကင်းထိုးသောသဘောကိုမုသာ.
5:5 ထိုသူတို့တာဝါတိုင်၌ပိတ်မိနေခဲ့ကြ, သူကသူတို့ကိုအနီးရှိအနေအထားချီ, သူကသူတို့ကို anathematized, သူမီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏တာဝါတိုင်ကိုမီးရှို့, သူတို့အထဲ၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူ.
5:6 ထို့နောက်သူအမ္မုန်၏သားမှကူး, သူတစ်ဦးအားကြီးသောလက်တွေ့ရှိရ, ကာပေါများသောလူ, နှင့်တိမောသေသူတို့ရဲ့တပ်မှူးခဲ့သည်.
5:7 ထိုမင်းသည်သူတို့နှင့်အတူအများအပြားတိုက်ပွဲများအတွက်စေ့စပ်, သူတို့မျက်မှောက်၌ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောခဲ့သည်, သူကသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်.
5:8 ထိုမင်းသည်ယာဇာမြို့သိမ်းဆည်းရမိ, နှင့်သူမ၏ညီမမြို့ကြီးများ, သူသည်ယုဒမှပြန်လာသော.
5:9 တပါးအမျိုးသားတို့သည်, ဂိလဒ်ပြည်၌အဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်တိုက်ခြင်းငှါစည်းဝေး, ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, သူတို့ကိုပယ်ယူ, ဒါသူတို့ Dathema ၏မြို့တော်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်.
5:10 ထိုသူတို့ကယုဒနှင့်အစ်ကိုတို့အားအက္ခရာများကိုစလှေတျ, ဟုဆို: "ဒီတပါးအမျိုးသားတို့သည်ပတ်လည်ကွာကျွန်တော်တို့ကိုသယ်ဆောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်အတူတကွစုဝေးခဲ့ကြ.
5:11 ထိုသူတို့ကကျနော်တို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရာသို့ခံတပ်လာနှင့်သိမ်းပိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်. နှင့်တိမောသေသူတို့ရဲ့စစ်တပ်များ၏တပ်မှူးဖြစ်ပါသည်.
5:12 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, မိမိတို့လက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလာများနှင့်ကယ်ဆယ်, ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောအဘို့အလဲသေကြပြီ.
5:13 လူအပေါငျးတို့ညီအစ်ကိုတွေ, တောဘ၏အရပ်တွင်အဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, အသေသတ်ခြင်းကိုပြီ. ထိုသူတို့ကသူတို့၏ဇနီး captives ကဲ့သို့ကွယ်ပျောက်ပို့ဆောင်, နှင့်၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များ, နှင့်သူတို့၏ဥစ္စာ. ထိုအရပ်ကိုနီးပါးလူတထောငျကွပ်မျက်ကြပြီ။ "
5:14 ထိုသူတို့ကယခုထိဒီစာလုံးဖတ်နေစဉ်တွင်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, ဂါလိလဲပြည်ကတခြားသံတမန်လက်မှအဲဒီမှာရောက်ရှိ, စုတ်သောအဝတ်နှင့်အတူ, အဘယ်သူသည်ထိုစကားနှင့်အညီထုတ်ပြန်ကြေညာ:
5:15 Ptolemais တုရုမြို့နှင့်ဇိဒုန်မြို့၏သူတွေကိုသူတို့တဘက်၌စုဝေးကြပြီတကားဟု, "နှင့်ဂါလိလဲလူအပေါင်းတို့နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ပြီး, ကျွန်တော်တို့ကိုလောင်နိုင်ရန်အတွက်။ "
5:16 သို့ဖြစ်., ယုဒနှင့်လူများတို့ကိုဟောပြောသောဤစကားကိုကြားလျှင်, တစ်ဦးကြီးသောပရိသတ်စည်းဝေးကြ၏, သူတို့ဒုက္ခရှိကြ၏သူတို့ကိုအားဖြင့် assailed ခံခဲ့ကြသည်သူတို့ရဲ့ညီအစျအတှကျအလုပျသငျ့သညျအဘယျသို့စဉ်းစားရန်.
5:17 ယုဒရှိမုနျအားသူ့အစ်ကိုကဆိုပါတယ်: "ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ယောက်ျား Choose, သွား, နှင့်ဂါလိလဲပြည်၌သင်၏အစ်ကိုတို့လွတ်မြောက်. ဒါပေမယ့်ငါနှင့်ငါ့ညီယောနသန်, ဂိလဒ်ပြည်သို့သွားပါလိမ့်မယ်။ "
5:18 ထိုမင်းသည်ယောသပ်ကိုကျန်ရစ်, ဇာခရိ၏သား, အာဇရိ, လူအများ၏တပ်မှူးများအဖြစ်, စစ်တပ်၏ကျန်ရှိသောနှင့်အတူ, ယုဒပြည်၌ရှိသော, ကစောငျ့ရှောကျဖို့.
5:19 ထိုသူတို့အားညွှန်ကြား, ဟုဆို, "ဒီကလူအုပ်ကိုယူ, ဒါပေမယ့်တပါးအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်မသွားဘူး, ကျနော်တို့ပြန်လာအထိပါပဲ။ "
5:20 အခုဆိုရင်သုံးထောင်ယောက်ျားရှိမုနျကိုခှဲဝေခဲ့ကြသည်, ဂါလိလဲပြည်သို့သွားရန်, ဒါပေမဲ့ရှစ်ထောင်ကိုယုဒခွဲဝေခဲ့ကြ, ဂိလဒ်ပြည်သို့သွားကြဖို့.
5:21 ရှိမုန်ဂါလိလဲပြည်သို့သွားလေ၏, သူသည်တပါးအမျိုးသားတို့နှင့်အတူအများအပြားတိုက်ပွဲများအတွက်စေ့စပ်, နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့သည်သူ၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခဲ့သည်, သူတောင်မှ Ptolemais တံခါးမှသူတို့ကိုလိုက်.
5:22 ထိုအရပ်၌တပါးအမျိုးသားတို့နီးပါးသုံးထောင်ယောက်ျားကျဆင်း, သူကသူတို့ဥစ္စာကိုယူ.
5:23 ထိုမင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူဂါလိလဲပြည်နှင့် Arbatta အတွက်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့ကိုယူ, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်ကလေးများနှင့်အတူ, လူအပေါင်းတို့ကြောင်းသူတို့ခဲ့သည်, သူကြီးအဝမ်းမြောက်နှင့်အတူယုဒပြည်သို့သူတို့ကိုငါဦးဆောင်.
5:24 ယုဒ Maccabeus, နှင့်ယောနသန်သည်မိမိအစ်ကို, ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး, သူတို့တောမှတဆင့်သုံးရကျခရီးခရီးထွက်.
5:25 ထိုအခါ Nabateans သူတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, သူတို့ငြိမ်းချမ်းစွာသူတို့ကိုလက်ခံခဲ့သည်, သူတို့ဂိလဒ်ပြည်၌သူတို့၏ညီအစျကိုဖွစျခဲ့ပွီးသမြှသောဖော်ပြထား,
5:26 သူတို့ကိုအများအပြားဗောဇရအတွက်ပိတ်မိနေခဲ့, နှင့် Bosor, နှင့်ဂါ, နှင့် Chaspho အတွက်, နှင့် Make, နှင့် Carnaim. ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမားပြီးခိုင်ခံ့သောမြို့များဖြစ်ကြသည်.
5:27 ထို့အပြင်, သူတို့သည်ဂိလဒ်၏အခြားမြို့ကြီးများမှာသူတို့ရဲ့ဆုပ်ကိုင်တှငျကငျြးပခဲ့ခဲ့ကြသည်, သူတို့စစ်တပ်ကရွှေ့ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့သည်, နက်ဖြန်နေ့၌, ထိုမြို့မှ, သူတို့ကိုဘမ်းဆီးခြင်းငှါ, တနေ့ခြင်းတွင်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့.
5:28 ထိုအခါယုဒနှင့်သူ၏တပ်မမျှော်လင့်ဘဲတောသို့မိမိတို့၏လမ်းကြောင်းကိုလှည့်, Bosor မှ, သူတို့မြို့သူမြို့သားသိမ်းပိုက်. သူသည်ထိုအထားကိုအစွန်းအားဖြင့်ယောက်ျားရှိသမျှအသတ်ခံရ, လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့၏ဥစ္စာကိုယူ, မီးနှင့်အတူမီးရှို့.
5:29 ထိုသူတို့ကညဉ့်အခါထိုအရပ်မှထကြ, သူတို့ရဲတိုက်မှအပေါင်းတို့သည်လမ်းထွက် သွား..
5:30 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ပထမဦးဆုံးအလင်းမှာ, သူတို့မျက်စိချီသည့်အခါ, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, လူအလုံးအရင်းရှိခဲ့, အရာရေတွက်မရနိုင်ခြင်း, လှေကားနှင့်စက်တွေဆောင်ခဲ့, ရဲတိုက်သိမ်းယူနိုင်ရန်အတွက်, နှင့်ချေမှုန်းရေးမှသူတို့ကို.
5:31 ယုဒတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့ကြောင်းကိုသိမြင်, နှင့်စစ်တိုက်ရာအျောဟစျသံတံပိုးများကဲ့သို့ကောင်းကင်သို့တက်လေ၏, နှင့်ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းမြို့အထွက် သွား..
5:32 ထိုမင်းသည်မိမိတပ်အားဆို၏, "သင်၏ညီအစ်ကိုများ၏ကိုယ်စားယနေ့ Fight ။ "
5:33 သူသညျ လာ., သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကသုံးကုမ္ပဏီများနှင့်, သူတို့သည်တံပိုးမှုတ်, သူတို့ဆုတောင်းပဌနာအတွက်ဟစ်.
5:34 နှင့်တိမောသေတပ်က Maccabeus ခဲ့ကြောင်းသိ, သူတို့သူ၏မျက်နှာကိုမတိုင်မီလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူ. ထိုသူတို့ကတစ်ဦးအကြီးအကွိမျဒဏျသူတို့နှင့်အတူလုပ်ကြံ. နီးပါးရှစ်ထောင်ယောက်ျားသည်ထိုနေ့အတွက်သူတို့ထံမှအဲဒီမှာကျဆင်း.
5:35 ယုဒမိဇပါမြို့လမ်းကြောင်းပြောင်း, သူကစစ်တိုက်ကြ၏နှင့်ဖမ်းဆီးရမိ. ထိုမင်းသည်ယင်း၏ယောက်ျားအားလုံးကိုသတ်ပစ်, သူက၎င်း၏ဥစ္စာကိုယူ, သူမီးနှင့်အတူမီးရှို့.
5:36 ထိုအရပ်မှ, သူကအပေါ်ကိုဆက်လက်, သူ Chaspho သိမ်းဆည်းရမိ, နှင့် Make, နှင့် Bosor, နှင့်ဂိလဒ်မြို့၏ကျန်.
5:37 သို့သော်ဤဖြစ်ရပ်များအပြီး, တိမောသေအခြားတပ်မတော်မှာစုဝေး, သူ Raphon ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူ၏စခန်း positioned, ခြောငျးကိုဖြတ်ပြီး.
5:38 ယုဒတပ်ကို၏မျက်မှောက်ဖမ်းရန်စေလွှတ်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုပြန်အစီရင်ခံတင်ပြ, ဟုဆို: "ကျွန်တော်တို့ကိုဝန်းရံကြောင်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌စုဝေးကြပြီ, တစ်ဦးသည်အလွန်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်းနှင့်တကွ.
5:39 ထိုသူတို့ကသူတို့ကို auxiliary အဖြစ်အာရပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ, သူတို့ခြောငျးကိုဖြတ်ပြီးစခန်းဖွင့်ထားပြီ, ။ စစ်တိုက်ရာတွင်သင်တို့တဘက်၌လာရန်ပြင်ဆင်မှုတွင် "ယုဒသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါသွားလေ၏.
5:40 နှင့်တိမောသေမိမိတပ်များ၏ခေါင်းဆောင်များကပြောသည်: "ဘယ်အချိန်မှာယုဒနှင့်သူ၏တပ်ချဉ်းကပ်, ရေခြောငျးနီးစပ်, သူကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ဖြတ်သန်းသွားသည်လျှင်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအကိုဆီးတားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. သူကကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်နိုင်မှနိုင်ပါလိမ့်မည်များအတွက်.
5:41 အကယ်., အမှန်တကယ်, သူကူးဝံ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါသူကမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးစခန်းဖွင့်သတ်မှတ်, ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကူးပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ "
5:42 သို့သော်ယုဒရှချဉ်းကပ်လာသောအခါ, ရေခြောငျးနီးစပ်, သူခြောငျးအနီးလူများကျမ်းပြုဆရာတပ်စွဲ, သူကသူတို့ကိုမှာထားတော်မူ, ဟုဆို, "နောက်ကွယ်ကနေအဘယ်သူမျှမသည့်အ, ဒါပေမယ့်အားလုံးစစ်တိုက်ကြလော့။ "
5:43 ထိုမင်းသည်ပထမဦးဆုံးသူတို့အဖို့ကူး, သူ့နောက်မှာနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်. လူအပေါင်းတို့သည်လည်းတပါးအမျိုးသားတို့သည်မိမိတို့၏မျက်နှာမတိုင်မီနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရခဲ့သည်, သူတို့လက်နက်တွေပျောက်ပစ်ချ, သူတို့ Carnaim ၌ပါသောဗိမာနျသို့ထွက်ပြေး.
5:44 ထိုမြို့ကိုသိမ်းပိုက်, သူမီးနှင့်ဗိမာနျတျောကိုမီးရှို့, အထဲတွင်ပါသောသူအပေါင်းတို့အမှုအရာတို့နှင့်အတူ. ထိုအ Carnaim ရှုံးခဲ့သည်, ထိုသို့ယုဒ၏မျက်နှာကိုဆန့်ကျင်မခံမရပ်နိုင်.
5:45 ယုဒအတူတကွဂိလဒ်ပြည်၌အဘယ်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ, အနည်းဆုံးအနေဖြင့်ပင်အကြီးမြတ်ဆုံးဖို့, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်ကလေးများနှင့်အတူ, နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်း, ယုဒပြည်သို့ကြွရန်.
5:46 ထိုသူတို့ကအဖြစ်ဝေးဧဖရုန်အဖြစ် လာ. ,. နှင့်ဤကြီးစွာသောမြို့, တံခါးနားမှာ positioned, ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခိုင်ခံ့သော, နှင့်လက်ျာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လက်ဝဲပေါ်မှာလှည့်ပတ်သွားရလမ်းမရှိသောခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်းကအလယ်တဆင့်ခဲ့.
5:47 ထိုမြို့သူမြို့သားအတွက်ဖြစ်နှင့်သောသူတို့အတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိတ်ကျောက်ခဲနှင့်မြို့တံခါးပိတ်ဆို့ထား. ဒါယုဒကငြိမ်းချမ်းရေးစကားသူတို့နှင့်အတူစေခြင်းငှါစေလွှတ်,
5:48 ဟုဆို, "ကျွန်တော်တို့ကိုသင်တို့ပြည်မှတဆင့်ကူးကြကုန်အံ့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရင်းပြည်သို့သွားကြဖို့, အဘယ်သူမျှမညှဉ်းဆဲမည်; ကျွန်တော်သာ။ ခြေလျင်မှတဆင့်ကူးပါလိမ့်မယ် "ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုဖွင့်လှစ်ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူး.
5:49 ထိုအခါယုဒရှတပ်၌လုပ်ရမည်၌ကြော်ငြာညွှန်ကြား, သူတို့ကသူတို့ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမယ်လို့, သူရှိရာအရပျမှတစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း.
5:50 ထိုအခါစစ်တပ်သားတို့သညျအနီးကပ်ဆွဲငင်. ထိုမြို့ရှိသမျှတို့ကိုနေ့နှင့်ညဉ့်လုံးစော်ကား. ထိုမြို့သူမြို့သားမိမိလက်သို့အပ်ခဲ့သည်.
5:51 ထိုသူတို့ကထားအစွန်းနှင့်အတူယောက်ျားရှိသမျှဖျက်ဆီးခံရ, သူသည်မြို့တော်ကိုအမြစ်ပြတ်, သူက၎င်း၏ဥစ္စာကိုယူ, သူတစ်ခုလုံးကိုမြို့မှတဆင့်ကူး, အသေခံရသောခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျော်.
5:53 ယုဒအဆိုပါ stragglers စုဆောင်းခြင်းနှင့်လူများတိုကျတှနျးခဲ့သညျ, တစ်ခုလုံးကိုလမ်းတလျှောက်လုံး, သူတို့သည်ယုဒပြည်သို့ရောက်ကြ၏သည်အထိ.
5:54 ထိုသူတို့ကဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့်အတူဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ mount မှတက်ပြီ, သူတို့မီးရှို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, သူတို့ကိုမတဦးတည်းလဲသေသောကြောင့်, သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြန်လာသောသည်အထိ.
5:55 အခုဆိုရင်ကျထကျ၌ယုဒနှင့်ယောနသန်သည်ဂိလဒ်ပြည်၌, ရှိမုန်သည်သူ၏အစ်ကို Ptolemais ၏မျက်နှာကိုဆန့်ကျင်ဂါလိလဲပွညျ၌ရှိ၏:
5:56 ယောသပ်သည်, ဇာခရိ၏သား, အာဇရိ, စစ်တပ်၏ခေါင်းဆောင်, စစ်တိုက်ကြ၏ခဲ့ကြသည်သောတိုက်ပွဲများနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းသောအရာများကိုကြား.
5:57 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ကျွန်တော်တို့မှာလည်းကိုယျ့ကိုယျကိုအမည်တစ်ခုလုပ်ပါစို့, ငါတို့ကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ကိုပတ်လည်၌နေသောတပါးအမျိုးသားတို့သည်တိုက်သွားကြကုန်အံ့။ "
5:67 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, some priests fell in battle. Since they desired to act boldly, they went out, without counsel, into the battle.
1 မက္ကဘီး 6
6:2 and that the temple in it was very opulent, and that there were, ထိုအရပျ၌အ, coverings of gold, and breastplates and shields, which Alexander, the son of Philip, king of Macedonia, who reigned first in Greece, had left behind.
6:6 and that Lysias went forth withaparticularly strong army, and he was forced to flee before the face of the Jews, and that they were strengthened by the weapons, နှင့်အရင်းအမြစ်များ, and many spoils which they seized from the camps they demolished,
6:7 and that they had destroyed the abomination, which he had established on the altar that was in Jerusalem, and that the sanctuary, just as before, had been encircled with high walls, along with Bethzur, သူ့မြို့.
6:8 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, when the king heard these words, he was terrified and very moved. And he fell down on his bed, and he fell into feebleness out of grief. For it had not happened to him as he had intended.
6:10 And he called all his friends, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: “Sleep has withdrawn from my eyes, and I am declining, and my heart has collapsed out of anxiety.
6:11 ထိုအကျွန်ုပ်၏နှလုံးထဲမှာကပြောပါတယ်: How much trouble has come to me, and what floods of sorrow there are, where I am now! I used to be cheerful and beloved in my power!
6:12 အမှန်ဆိုသည်ကား,, ယခု, I remember the evils that I did in Jerusalem, from which place I also took away all the spoils of gold and silver that were in it, and I sent to carry away the inhabitants of Judah without cause.
6:13 ထို့ကြောင့်, I know that it is because of this that these evils have found me. ထိုအခါ, I perish with great sorrow inaforeign land.”
6:15 And he gave him the diadem, and his robe, and his ring, so that he would guide Antiochus, သူ့သား, and raise him, and so that he would reign.
6:17 And Lysias knew that the king was dead, and he appointed Antiochus, သူ့သား, to reign, whom he had raised from adolescence. And he called his name Eupator.
6:22 And they went to the king, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်: “How long will you not act with judgment and vindicate our brothers?
6:24 ထိုအကြောင်းကြောင့်ဤအမှု, the sons of our people have alienated themselves from us, and they have put to death as many of us as they could find, and they have torn apart our inheritances.
6:26 ထိုအခါ, this day they have takenaposition near the stronghold of Jerusalem to occupy it, and they have fortified the stronghold of Bethzur.
6:27 နှင့်, unless you quickly act to prevent them, they will do greater things than these, and you will not be able to subdue them.”
6:33 And the king rose up, before it was light, and he forced his troops to march toward the way of Bethzechariah. And the armies prepared themselves for battle, သူတို့သည်တံပိုးမှုတ်.
6:37 ထို့အပြင်, upon them there were strong wooden turrets, watching over every beast, with machines upon them, and on them were thirty-two valiant men, who fought from above, and an Indian to rule each beast.
6:39 ဆိုတော့, when the sun reflected off the shields of gold and of brass, the mountains were resplendent from them, and they glowed like lamps of fire.
6:46 And he went between the feet of the elephant, and put himself under it, and he killed it. And it fell to the ground upon him, သူအဲဒီမှာကွယ်လွန်သွား.
6:47 နှင့်, seeing the strength of the king and the forcefulness of his army, they turned themselves away from them.
6:55 Then Lysias heard that Philip, whom king Antiochus had appointed, when he was still alive, to raise his son, အန်, and to reign,
6:58 ဒီတော့ယခု, let us bestowapledge to these men, and make peace with them and with all their nation.
6:59 And let us establish for them that they may walk according to their own laws, just as before. အကြောင်းမူကား,, because of their laws, which we despised, they have become angry and have done all these things.”
1 မက္ကဘီး 7
7:2 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, as he entered into the house of the kingdom of his fathers, the army captured Antiochus and Lysias, to bring them to him.
7:3 And the matter became known to him, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, “Do not show me their face.”
7:6 And they accused the people to the king, ဟုဆို: “Judas and his brothers have destroyed all your friends, and he has scattered us from our land.
7:7 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, sendaman, whom you trust, and let him go and see all the destruction he has done to us and to the regions of the king. And let him punish all his friends and their helpers.”
7:9 to see the destruction that Judas had done. ထို့အပြင်, he appointed the wicked Alcimus to the priesthood, and he commanded him to take revenge on the sons of Israel.
7:10 And they rose up and came forth withagreat army into the land of Judah. And they sent messengers, who spoke to Judas and his brothers with words of peace, လှညျ့စားအတွက်.
7:14 သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်, “A man who isapriest from the offspring of Aaron has arrived; he will not deceive us.”
7:15 And he spoke to them peaceful words, and he swore to them, ဟုဆို, “We will not carry out any evil against you or your friends.”
7:17 The flesh of your saints, and their blood, they have poured out all around Jerusalem, သူတို့ကိုသင်ျဂွိုဟျမယ်လို့ဘယ်သူမျှမခဲ့.
7:18 Then fear and trembling hovered over all the people. သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်: “There is no truth or judgment among them. For they have transgressed the agreement and the oath that they swore.”
7:23 And Judas saw all the evils that Alcimus, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, did to the sons of Israel, even more than the Gentiles did.
7:25 But Alcimus saw that Judas, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, prevailed. And he knew that he was not able to withstand them. And so he returned to the king, and he accused them of many crimes.
7:28 ဟုဆို: “Let there be no fighting between me and you. I will come withafew men, to see your faces with peace.”
7:35 and he swore with anger, ဟုဆို, “Unless Judas and his army have been delivered into my hands, when I return in peace, I will burn this house.” And he went out with great anger.
7:36 And the priests went in and stood before the face of the altar and the temple. ထိုမြို့၌ငိုကြွေးသံ, သူတို့ကဆိုပါတယ်:
7:37 "သင်, အိုထာဝရဘုရား, have chosen this house so that your name may be invoked in it, so that it may beahouse of prayer and supplication for your people.
7:40 And Judas tookaposition in Adasa with three thousand men. And Judas prayed, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်:
7:41 "အိုသခင်ဘုရား, when those who were sent by king Sennacherib blasphemed against you, an angel went out and struck one hundred and eighty-five thousand of them.
7:44 သို့ဖြစ်., when his army saw that Nicanor had fallen, they threw away their weapons and fled.
1 မက္ကဘီး 8
8:1 And Judas heard of the fame of the Romans, that they are powerful and strong, and that they willingly agree to all things that are asked of them; နှင့်, whoever was agreeable to them, they establishedafriendship with them, and so they are powerful and resourceful.
8:6 and how Antiochus, the great king of Asia, who broughtafight against them, having one hundred and twenty elephants, with horsemen, and swift chariots, နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအလုံးအရင်း, was crushed by them,
8:10 And so they sent one general to them, and he fought against them, and many of them fell, and they led into captivity their wives, နှင့်သူတို့သား, and they despoiled them and took possession of their land, and they destroyed their walls and drove them into servitude, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်.
8:13 တကယ်တော့, whomever they wanted to help become ruler, these reigned, but whomever they wanted, they deposed from the kingdom. And they were greatly exalted.
8:15 လည်း, they had made themselvesasenate house, and they consulted daily with three hundred and twenty men, continually acting asacounsel for the multitude, so that they would do the things that were right.
8:17 And so Judas chose Eupolemus, ယောဟနျ၏သား, the son of Jacob, and Jason, ဧလာဇာ၏သား, and he sent them to Rome to make an agreement of friendship and an alliance with them,
8:19 And they went to Rome,avery long journey, and they entered the senate house, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်,
8:20 “Judas Maccabeus, နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ, and the people of the Jews, have sent us to you to establish with you an alliance and peace, and so that we may be registered among your associates and friends.”
8:23 “May all be well with the Romans and with the nation of the Jews, at sea and on land, အစဉ်အမြဲ, and may sword and enemy be far away from them.
8:30 နှင့်, if after these words, one or another would want to add anything to, or take anything from these, they may do as they propose. And whatever they add or take away, it shall be ratified.
8:31 ထို့အပြင်, concerning the evils that king Demetrius did to them, we have written to him, ဟုဆို, ‘Why have you made your yoke heavy upon our friends and allies, ယုဒလူတို့?
8:32 အကယ်., ထိုကွောငျ့, they come again to us against you, we will render judgment for them, and we will make war against you by sea and by land.’ ”
1 မက္ကဘီး 9
9:1 ဤအတောအတွင်း, when Demetrius heard that Nicanor and his army had fallen in battle, he again positioned Bacchides and Alcimus in Judea, and the right horn of his army with them.
9:8 ဆိုတော့, he said to those who were remaining, “Let us rise up and go against our enemies, perhaps we may be able to fight against them.”
9:9 But they dissuaded him, ဟုဆို: “We will not be able, but let us try to save our lives and return to our brothers, and then we will fight against them. For we are but few.”
9:10 ယုဒကဆိုပါတယ်: “Far be it from us, to do this thing, so as to flee away from them. But if our time has drawn near, let us die with virtue, on behalf of our brothers, and let us not inflict guilt upon our glory.”
9:12 ထို့အပြင်, Bacchides was with the right horn, and the legion drew near on both sides, သူတို့သည်တံပိုးမှုတ်.
9:13 But those also who were from the side of Judas, these also now cried out, and the earth shook at the noise of the armies. And the battle was joined from morning, ပင်သည်ညဦးတိုင်အောင်.
9:16 And those who were with the left horn saw that the right horn was crushed, and so they followed after Judas, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, at their back.
9:19 And Jonathan and Simon carried Judas, သူတို့ရဲ့အစ်ကို, and they buried him in the sepulcher of their fathers, in the city of Modin.
9:21 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, “Suchapowerful man has fallen, who accomplished the salvation of the people of Israel!"
9:23 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, after the death of Judas, the iniquitous began to emerge in all the parts of Israel, and they began to encourage all those who worked iniquity.
9:24 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, there occurredavery great famine, and the entire region handed itself over to Bacchides.
9:30 ဒီတော့ယခု, we have chosen you in his place, on this day, to be our leader and commander in order to wage our wars.”
9:31 ဆိုတော့, ထိုအချိန်မှာ, Jonathan took upon himself the leadership, and he rose up in the place of Judas, သူ့အစ်ကို.
9:34 And Bacchides knew of it, and on the day of the Sabbath, he himself arrived, မိမိဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး.
9:36 And the sons of Jambri went forth from Medeba, and they captured John, သူရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်အားလုံး, and they went away in possession of these.
9:38 And they remembered the blood of John, သူတို့ရဲ့အစ်ကို. And they went up and hid themselves under the cover of the mountain.
9:39 And they lifted up their eyes and saw. ထိုအခါ,atumult andawell-prepared multitude. And the bridegroom proceeded, with his friends and his brothers, to meet them with timbrels, and musical instruments, and many weapons.
9:43 And Bacchides heard about this, and he came on the day of the Sabbath all the way to the coast of the Jordan, အလွန်ကြီးစွာသောအင်အားစုနှင့်အတူ.
9:44 And Jonathan said to his own: “Let us rise up and fight against our enemies. For it is not today, as it was yesterday, မပြုမီသို့မဟုတ်နေ့ကို.
9:45 ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, the war is before us, အမှန်တကယ်, with the water of the Jordan here and there, and the banks, and the marshes, and the woods: there is no place for us to turn aside.
9:46 ထို့ကြောင့်, cry out now to heaven so that you may be freed from the hand of your enemies.” And they joined together in warfare.
9:48 နှင့်ယောနသန်, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, leaped forward into the Jordan, and they swam across the Jordan to them.
9:49 And there fell from the side of Bacchides on that day one thousand men. ထိုသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာသော.
9:55 ထိုအချိန်မှာ, Alcimus was struck, and his works were hindered, and his mouth was closed shut, and he was weakened with paralysis, so that he was no longer able speakaword, nor to give orders concerning his house.
9:58 And all the iniquitous considered together, ဟုဆို, "အကယ်, ယောနသန်, သူနှင့်အတူနေသောသူတို့ကို, live in quietude and confidence. အခုတော့, ထိုကွောငျ့, let us bring forth Bacchides, and he will capture them all, in one night.”
9:62 နှင့်ယောနသန်, ရှိမုန်, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, withdrew into Bethbasi, which is in the desert. And he repaired its breaches, and they fortified it.
9:67 အမှန်တရားမှာ, ရှိမုနျကို, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, went forth from the city and burned the machines of war,
9:73 And so the sword ceased from Israel. And Jonathan lived in Michmash, နှင့်, ထိုအရပျ၌အ, Jonathan began to judge the people, and he destroyed the impious out of Israel.
1 မက္ကဘီး 10
10:1 And in the one hundred and sixtieth year, အလက်ဇန်းဒါး, the son of Antiochus, who was surnamed the illustrious, came up and occupied Ptolemais, and they received him, and he reigned there.
10:4 ဟုသူကပြောသည်များအတွက်, “Let us first makeapeace with him, before he makes one with Alexander against us.
10:11 And he told those doing the work to build up the walls, and mount Zion, ပတ်လည်, with square stones, asafortification. ထိုသူတို့ပြု.
10:12 Then the foreigners, who were in the fortifications that Bacchides had built, ပွေး.
10:16 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: “Would we ever find another such man? ဒီတော့ယခု, let us make him our friend and our associate.”
10:17 ဆိုတော့, he wrotealetter, and he sent it to him, according to these words, ဟုဆို:
10:18 “King Alexander to his brother, ယောနသန်: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
10:20 ဒီတော့ယခု, on this day, we appoint that you be high priest of your people, and that you be called the king’s friend, (and he sent himapurple robe, andacrown of gold,) and that you be of one mind with us in our affairs, and that you keep friendship with us.”
10:21 Then Jonathan clothed himself with the holy vestment, သတ္တမလ၌, in the one hundred and sixtieth year, on the solemn day of the Feast of Tabernacles. And he gathered together an army, and he made an abundance of weapons.
10:22 And Demetrius heard these words, and he was exceedingly sorrowful, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်:
10:25 And he wrote to them in these words: “King Demetrius to the nation of the Jews: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
10:27 ဒီတော့ယခု, persevere still to remain faithful to us, and we will reward you with good things for what you have done for us.
10:29 နှင့်ယခု, I release you, and all the Jews, from tributes, and I grant to you the payments of salt, and I send back the crowns and the thirds of the seed.
10:32 And I even return authority over the stronghold, ယေရုရှလင်မြို့၌အရာဖြစ်ပါသည်, and I give it to the high priest, in order to appoint in it any such men as he will choose, who will guard it.
10:41 And all that has been left over, which those who were set over the affairs in prior years have not paid: ဤအချိန်ကနေ, they will give it to the works of the house.
10:51 And Alexander sent ambassadors to Ptolemy, အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်, according to these words, ဟုဆို:
10:54 နှင့်ယခု, let us establishafriendship with one with another. And give me your daughter asawife, and I will be your son-in-law, and I will give gifts that are worthy of you, to both you and her.”
10:56 နှင့်ယခု, I will do for you as you have written. But meet with me at Ptolemais, so that we may see one another, and so that I may espouse her to you, just as you have said.”
10:60 And he went forth with glory to Ptolemais, and he met the two kings there, and he gave them much silver, ရွှေနှင့်, နှင့်လက်ဆောင်များ. And he found favor in their sight.
10:62 And he ordered that Jonathan’s garments be taken away from him, and that he be clothed in purple. ထိုသူတို့ပြု. And the king arranged for him to sit with him.
10:64 ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, when his accusers saw his glory being proclaimed, and him clothed in purple, they all fled away.
10:69 And king Demetrius appointed Apollonius as his general, who was in charge of Coelesyria. And he gathered togetheragreat army, and he drew near to Jamnia. And he sent to Jonathan, ယဇ်ပုရောဟိတ်,
10:70 ဟုဆို: “You alone resist us, and so I have been brought to derision and disgrace, because you exercise your power against us in the mountains.
10:71 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, if you trust in your forces, descend to us in the plains, and there let us contest one another. For the power of war is with me.
10:73 နှင့်ယခု, how will you be able to withstand the horsemen, and so great an army in the plains, where there is no stone, or rock, or place to flee?"
10:74 But when Jonathan heard the words of Apollonius, he was moved in his soul. And he chose ten thousand men, and he departed from Jerusalem, ရှိမုန်, သူ့အစ်ကို, met him to help him.
10:75 And they positioned their tents near Joppa, but they excluded him from the city, becauseagarrison from Apollonius was in Joppa. ဆိုတော့, he attacked it.
10:76 And those who were in the city, ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း, opened to him. And so Jonathan obtained Joppa.
10:82 Then Simon drew forth his army, and he sent them against the legion. For the horsemen were wearied. And they were crushed by him, သူတို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်.
10:83 And those who were scattered throughout the plains fled to Azotus, and they entered into Bethdagon, သောကြောင့်, by their idol in that place, they might save themselves.
10:86 နှင့်ယောနသန်, removed his encampment from there, and he took upaposition against Askalon. And they went out of the city to meet him with great glory.
10:88 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, when king Alexander heard these words, he added still more glory to Jonathan.
1 မက္ကဘီး 11
11:4 And when he drew near to Azotus, they revealed to him that the temple of Dagon had been burned with fire, and Azotus and its suburbs had been demolished, and bodies had been abandoned, နှင့်, for those who had been cut to pieces in the war, they had madeatomb along the way.
11:9 And he sent ambassadors to Demetrius, ဟုဆို: "လာ, let us composeapact between us, and I will give you my daughter, whom Alexander had, and you will reign in the kingdom of your father.
11:20 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, Jonathan gathered together those who were in Judea, in order to fight against the stronghold that was in Jerusalem. And they made many machines of war against it.
11:21 ဆိုတော့, certain men of iniquity, who hated their own people, went forth to king Demetrius, and they reported to him that Jonathan was besieging the stronghold.
11:24 And he took gold, နှင့်ငွေ, and vestments, and many other presents, and he went to the king at Ptolemais, and he found favor in his sight.
11:30 “King Demetrius to his brother Jonathan, and to the nation of the Jews: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
11:32 ‘King Demetrius to Lasthenes, his parent: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
11:34 ထို့ကြောင့်, we have assigned to them all the parts of Judea, and the three cities, Lydda and Ramatha, which were added to Judea from Samaria, and all their confines, to be set apart for all those sacrificing in Jerusalem, in place of that which the king previously received from them each year, and in place of the fruits of the land and of the fruit trees.
11:35 နှင့်, as for the rest of that which pertains to us from tithes and tributes, ဤအချိန်ကနေရှေ့ကို, we release them from these, as well as from the drying areas of salt and the crowns that were presented to us.
11:37 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, take care to makeacopy of these things, and let it be given to Jonathan and set upon the holy mountain, in an honorable place.’ ”
11:42 And Demetrius sent to Jonathan, ဟုဆို: “I will not only do this for you and your people, but I will elevate your glory and your nation, when opportunity shall serve.
11:43 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, you will do well if you send men as auxiliaries to me. For all my army has withdrawn from me.”
11:48 And they killed, ထိုကာလ၌, one hundred thousand men, and they set fire to the city, and they seized many spoils in that day, and they freed the king.
11:49 And those who were of the city saw that the Jews had taken the city, just as they wanted, and they were weakened in their resolve, and they cried out to the king with supplication, ဟုဆို,
11:54 But after this, Trypho returned, and with him was Antiochus, the adolescent boy, သူစိုးစံလေ၏, and he putadiadem on himself.
11:55 And there assembled before him all the troops, which Demetrius had dispersed, သူတို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်သော်လည်း. And he turned his back and fled.
11:57 And young Antiochus wrote to Jonathan, ဟုဆို: “I confirm you in the priesthood, and I appoint you over the four cities, so as to be among the king’s friends.”
11:67 And Jonathan and his camp tookaposition by the water of Gennesaret, နှင့်, before first light, they were standing watch in the plains of Hazor.
11:68 ထိုအခါ, an army of foreigners met him in the plains. And they set up an ambush against him in the mountains. But he met them from the opposite direction.
11:70 And all those who were from Jonathan’s side fled, and not one of them was left, except Mattathias, the son of Absalom, ယုဒ, the son of Chalphi, the leader of military training.
1 မက္ကဘီး 12
12:3 And they went to Rome and entered into the senate house, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, “Jonathan, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and the nation of the Jews, have sent us to renew the peace and alliance, as it was before.”
12:6 “Jonathan, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and the elders of the people, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and the rest of the people of the Jews, to the Spartans, သူတို့ညီအစ်ကိုများ: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
12:7 အခုတော့, some time ago, letters were sent to Onias, the high priest from Arius, who reigned then among you, so that you would be our brothers, just as the copy that is written below states.
12:9 We, သော်လည်း, have no need of these things, having for our solace the sacred books, which are in our hands.
12:11 ထို့ကြောင့်, we will remember you, at all times without ceasing, in our solemnities and other days, when it is fitting, in the sacrifices that we offer, and in our observances, just as it is fitting and right to remember brothers.
12:12 ဆိုတော့, we rejoice at your glory.
12:16 ဆိုတော့, we have chosen Numenius, the son of Antiochus, and Antipater, the son of Jason, and we have sent them to the Romans, to renew the former peace treaty and alliance with them.
12:17 ဆိုတော့, we have commanded them to also come to you, and to greet you, and to deliver our letters to you, about the renewal of our brotherhood.
12:18 နှင့်ယခု, you would do well to respond to us about these things.”
12:20 “Arius, king of the Spartans, to Onias, အကြီးအပုရောဟိတ်: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
12:23 But we also have written back to you that our cattle and our possessions are yours, and yours are ours. ဆိုတော့, we have commanded that these things should be announced to you.”
12:25 ဆိုတော့, he departed from Jerusalem, and he met them in the region of Hamath. For he did not give them time to enter into his own region.
12:26 And he sent spies into their camp, နှင့်, ပြန်လာ, they reported that they planned to come upon them in the night.
12:27 And when the sun had set, Jonathan instructed his men to stand watch, and to be in arms, ready to fight, ညလုံးပေါက်, and he stationed guards around the camp.
12:29 သို့သော်ယောနသန်, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်ထို, did not know about it until morning. For they saw the lights burning.
12:38 And Simon rebuilt Adida in Shephelah, သူကခိုင်ခံ့သော, and he set up gates and bars.
12:39 ဆိုတော့, when Trypho had decided to reign over Asia, and to assume the diadem, and to extend his hand against king Antiochus,
12:45 နှင့်ယခု, send them back to their houses, but choose for yourselfafew men, who may remain with you, and come with me to Ptolemais, and I will deliver it to you, and the rest of the fortresses, နှင့်တပ်မတော်, and all who are in charge of governing, and I will turn and go away. For this is the reason that I came.”
12:50 ဒါပေမယ့်, when they had thought that Jonathan had been captured and slain, along with all who were with him, they encouraged one another, and they went out prepared for battle.
12:52 ဆိုတော့, they all came into the land of Judah with peace. And they bewailed Jonathan, and those who had been with him, exceedingly. And Israel mourned with great lamentation.
12:53 Then all the nations that were all around them sought to crush them. သူတို့ကဆိုပါတယ်များအတွက်:
12:54 “They have no leader or helper. သို့ဖြစ်., let us fight against them and take away the memory of them from among men.”
1 မက္ကဘီး 13
13:3 And exhorting them, ဟုသူကပြောသည်: “You know what great battles I, and my brothers, and the house of my father, have fought for the laws and for the holy places, and the anguish that we have seen.
13:5 နှင့်ယခု, it is not necessary for me to spare my life in any time of tribulation. For I am not better than my brothers.
13:6 ဆိုတော့, I will vindicate my people and the sanctuary, and likewise our children and wives. For all the Gentiles have gathered together to crush us, solely out of malice.”
13:8 And they responded withaloud voice, ဟုဆို: “You are our leader in place of Judas and of Jonathan, သင့်အစ်ကို.
13:10 ဆိုတော့, gathering together all the men of war, he accelerated the completion of all the walls of Jerusalem, and he fortified it all around.
13:12 And Trypho moved from Ptolemais, withagreat army, ယုဒပြည်သို့ကြွရန်, and Jonathan was with him in custody.
13:14 And when Trypho realized that Simon rose up in the place of his brother, ယောနသန်, and that he would be joining in battle with him, he sent messengers to him,
13:15 ဟုဆို: “We have detained your brother, ယောနသန်, because of the money that he owed to the king’s account, because of the matters for which he was responsible.
13:16 နှင့်ယခု, sendahundred talents of silver, and two of his sons for hostages, so that when he is dismissed, he may not flee from us. And then we will release him.”
13:20 ထိုနော, Trypho came into the country, to crush it. And they circled around by the way that leads to Adora. And Simon and his camp marched into every place, wherever they went.
13:25 And Simon sent and took the bones of Jonathan, သူ့အစ်ကို, and he buried them in Modin, the city of his fathers.
13:30 This is the sepulcher that he made in Modin, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်.
13:31 But Trypho, when he was onajourney with the young king, အန်, killed him by deceit.
13:32 မိမိအရာ၌နန်းထိုင်, and he put on the diadem of Asia, and he caused great scourges upon the land.
13:36 “King Demetrius to Simon, the high priest and friend of kings, and to the elders, and to the people of the Jews: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
13:39 အလားတူပဲ, any oversight or fault, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်, we forgive it, along with the crown that you owed. And if anything else was taxed in Jerusalem, now let it not be taxed.
13:43 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, Simon took upaposition at Gaza, and he encamped around it, and he made machines of war, and he applied them to the city, and he struck one tower and captured it.
13:45 And those who were in the city ascended upon the wall, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်ကလေးများနှင့်အတူ, having torn their tunics. And they cried out withaloud voice, asking Simon to grant themapledge.
13:46 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, “Do not repay us according to our malice, but according to your mercy.”
13:47 ထိုမြို့၌ငိုကြွေးသံ, Simon did not destroy them. Yet he cast them out of the city, and he cleansed the buildings, in which there had been idols. And then he entered into it with hymns, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ.
13:48 နှင့်, having cast out of it all uncleanness, he placed in it men who would observe the law. And he fortified it and made it his dwelling place.
13:51 And they entered into it on the twenty-third day of the second month, in the one hundred and seventy-first year, with thanksgiving, နှင့်ထန်းကိုင်းအခက်များ, နှင့်တီးသောစောင်း, နှင့်လင်းကွင်း, နှင့်တယော, and hymns, and canticles, becauseagreat enemy had been crushed out of Israel.
13:54 And Simon saw that John, သူ့သား, wasavaliant man in battle. And so he appointed him as commander of all the forces. And he lived in Gazara.
1 မက္ကဘီး 14
14:5 နှင့်, with all his glory, he accepted Joppa asaport, and he made it an entrance to the islands of the sea.
14:10 And he gave tributes of provisions to the cities, and he decreed that they would have equipment for fortification, so that the fame of his glory was renowned, ပင်ကိုမြေကြီးစွန်းမှ.
14:17 But when they heard that Simon, သူ့အစ်ကို, had been made high priest in his place, and that he obtained the entire country and the cities in it,
14:18 they wrote to him on tablets of brass, so as to renew the friendship and alliance, which they had made with Judas and with Jonathan, သူ့အစ်ကိုတွေ.
14:20 “The leaders and the cities of the Spartans, to Simon, အကြီးအပုရောဟိတ်, and to the elders, ယဇ်ပုရောဟိတ်, and the rest of the people of the Jews, သူတို့ညီအစ်ကိုများ: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
14:21 The ambassadors who were sent to our people have reported to us of your glory, ဂုဏ်အသရေ, နှင့်ဝမျးမွောကျသောစိ. And we were glad at their arrival.
14:23 And it pleased the people to receive the men gloriously, and to placeacopy of their words inasection of the public books, so as to beamemorial for the people of the Spartans. ထို့အပွငျ, we have writtenacopy of them to Simon, the great priest.’ ”
14:25 But when the people of Rome had heard these words, သူတို့ကဆိုပါတယ်: “With what deeds of thanksgiving shall we repay Simon and his sons?
14:28 inagreat convocation of the priests, နှငျ့လူ, and the leaders of the nation, and the elders of the country, these things were noted: ‘Now there have often been battles in our country.
14:29 ရှိမုန်, the son of Mattathias, of the sons of Jarib, နှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ, have put themselves in danger, and have withstood the enemies of their nation, so as to establish their holy places and the law. And they have glorified their people with great glory.
14:36 And in his days, there was prosperity by his hands, so that the Gentiles were taken away from their country, and also those who were in the city of David, ယေရုရှလင်မြို့၌, in the stronghold, from which they went out and contaminated all the places that were around the sanctuary, and from which they broughtagreat scourging against chastity.
14:39 ဤအရာတို့ကိုအလိုအရ, he made him his friend, and he glorified him with great glory.
14:40 For he heard that the Romans had called the Jews their friends, and associates, နှငျ့ညီ, and that they received the ambassadors of Simon with glory,
1 မက္ကဘီး 15
15:1 And king Antiochus, the son of Demetrius, sent letters from the islands of the sea to Simon, the priest and leader of the nation of the Jews, နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်မှ.
15:2 And these continued in this way: “King Antiochus to Simon, အကြီးအပုရောဟိတ်, and to the people of the Jews: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
15:3 Since certain pestilent persons have obtained the kingdom of our fathers, it is my will, ထို့နောက်, to vindicate the kingdom and to restore it, just as it was before. ဆိုတော့, I have chosenagreat army, and I have built ships of war.
15:4 ထို့အပွငျ, I intend to pass through the region, so that I may take revenge on those who have corrupted our country and who have desolated many cities in my kingdom.
15:5 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, I confirm to you all the oblations that all the kings before me have remitted to you, and whatever other gifts they remitted to you.
15:7 ထို့အပြင်, let Jerusalem be holy and free. And all the weapons that have been made, and the fortresses that you have constructed, or that you hold, let them remain with you.
15:9 သို့သျောလညျး, when we have obtained our kingdom, we will glorify you, and your nation, and the temple with great glory, so much so that your glory shall be made manifest in all the earth.”
15:16 “Lucius, consul of the Romans, to king Ptolemy: နှုတ်ခွန်းဆက်စကား.
15:19 ဆိုတော့, it was pleasing to us to write to the kings and the regions, that they should do no harm to them, nor fight against them, နှင့်၎င်းတို့၏မြို့ကြီးများ, and their regions, and that they should bear no assistance to those fighting against them.
15:21 အကယ်., ထိုကွောငျ့, those who are pestilent have taken refuge with you from their region, hand them over to Simon, the leader of the priests, so that he may giveaverdict to them according to their law.”
15:24 ထို့အပြင်, they wroteacopy of these things to Simon, the leader of the priests and the people of the Jews.
15:26 And Simon sent two thousand chosen men to him as auxiliaries, နှင့်ငွေ, ရွှေနှင့်, and an abundance of equipment.
15:28 And he sent to him Athenobius, one of his friends, to deal with him, ဟုဆို: “You hold Joppa and Gazara, and the stronghold that is in Jerusalem, which are cities of my kingdom.
15:30 အခုတော့, ထိုကွောငျ့, hand over the cities that you occupy, and the tributes of the places where you have become ruler beyond the borders of Judea.
15:31 သို့သော်လျှင်မ, give me for them five hundred talents of silver, and for the destruction that you have caused, and for the tributes of the cities, another five hundred talents. သို့သော်လျှင်မ, we will come and fight against you.”
15:32 So Athenobius, ရှငျဘုရငျ၏မိတျဆှေ, came to Jerusalem and saw the glory of Simon, and his splendor in gold and silver, and his abundance of equipment, and he was astonished. And he repeated the words of the king to him.
15:33 And Simon responded to him, သူကသူ့ကိုအားဆို၏: “We have not taken foreign land, nor do we hold anything foreign, but we hold the inheritance of our fathers, which was for some time unjustly possessed by our enemies.
15:34 အမှန်တရားမှာ, since we have the opportunity, we claim the inheritance of our fathers.
15:36 ဒါပေမယ့်, returning with anger to the king, he reported to him these words, and the glory of Simon, and all that he had seen. And the king became angry withagreat anger.
1 မက္ကဘီး 16
16:1 ဆိုတော့, John came up from Gazara, and he reported to Simon, သူ၏ဖခင်, what Cendebeus had done against their people.
16:2 And Simon called his two eldest sons, Judas and John, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: “I and my brothers, ငါ့အဘ၏အိမ်တော်, have fought against the enemies of Israel from our youth, ပင်ယနေ့တိုင်အောင်. And this work has prospered in our hands, so that we have delivered Israel several times.
16:3 And now that I am old, you must act in place of me and my brothers, and go out to fight for our nation. အမှန်ဆိုသည်ကား,, may the help of heaven be with you.”
16:4 Then he chose from the region twenty thousand men of warfare, နှင့်မြင်းစီးသူရဲ; and they started out toward Cendebeus. And they rested in Modin.
16:5 And they rose up in the morning and went out into the plains. ထိုအခါ, an abundant army of foot soldiers and horsemen was there to meet them, and there wasariver flowing between them.
16:6 And he and his people moved their camp opposite their face, and he saw the trepidation of the people to cross over the river, and so he crossed over first. သူ့ကိုကိုမြင်လျှင်, the men also crossed after him.
16:9 ထိုအခါယုဒ, ယောဟန်၏အစ်ကို, was wounded. But John pursued them, until he came to Kedron, which he had built.
16:14 Now when Simon was traveling through the cities that were in the region of Judea, and acting with concern for them, he went down to Jericho, he and Mattathias and Judas, သူ၏သားတို့အ, in the one hundred and seventy-seventh year, in the eleventh month; this is the month of Shevat.
16:16 And when Simon and his sons became inebriated, Ptolemy and his men rose up, and took their weapons, and entered into the gathering. And they killed him, နှင့်သူ၏သားနှစ်ဦး, and some of his servants.
16:19 And he sent others to Gazara to destroy John. And he sent letters to the tribunes to come to him, and he would give them silver, ရွှေနှင့်, နှင့်လက်ဆောင်များ.
16:24 ကှ္ဂျကှ္ဂျ, these have been written in the book of the days of his priesthood, from the time that he became high priest, after his father.